ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီ၏ (၆)လပွညျ့ နိုငျငံတျောတာဝနျထမျးဆောငျခဲ့မှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျပွောကွားသညျ့မိနျ့ခှနျး » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ဩဂုတျ ၂၊ ၂၀၂၁
ဒီနဟေ့ာဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီက နိုငျငံတျောရဲ့ တာဝနျကို ထမျးဆောငျခဲ့တာ (၆)လပွညျ့မွောကျတဲ့နဖွေ့ဈပါတယျ။ တိုငျးရငျးသား ပွညျသူတှအေားလုံး ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါဘေးမှ အမွနျဆုံးကငျးဝေးပွီး ကနျြးမာကွပါစေ လို့ ဦးစှာ ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့သအပျပါတယျ။
ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါကို အစိုးရ၊ တိုငျးရငျးသား ညီအဈကိုမောငျနှမ ပွညျသူတှအေားလုံးနဲ့ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးတှအေားလုံး လကျတှဲပွီး စုပေါငျးညီညှတျစှာ ရငျဆိုငျကွ ရပါမယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့မူဝါဒကတော့ လူ့အသကျထကျ အရေးကွီးတာမရှိပါဘူး။ အဓိကကတော့ ကနျြးမာရေးပါ။ ကနျြးမာမှအလုပျလုပျနိုငျမှာ၊ ကနျြးမာမှပညာ သငျကွား နိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ တိုငျးရငျးသားပွညျသူလူထုရဲ့ကနျြးမာရေးထကျ အရေးကွီးတာ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးလုပျငနျးစဉျ တှမှော ဘာကနျ့သတျခကျြမှမထားပါဘူး။ ရှိသမြှသော လူ့စှမျးအား၊ ပစ်စညျးစှမျးအား၊ ဉာဏစှမျးအားတှနေဲ့ကာကှယျကွပါမယျ။ ကြှနျတျောတို့ အောငျကိုအောငျမွငျကွရပါမယျ။ တိုငျးရငျးသားပွညျသူအားလုံးရဲ့ စုပေါငျးညီညှတျမှုနဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါကို အောငျမွငျရမယျ။ စဈမှနျစညျးကမျးပွညျ့ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီစနဈတညျဆောကျရေး အောငျမွငျရပါမယျ။ ဒီလိုအောငျစိတျကို စညျးလုံးညီညှတျမှု၊ ယုံကွညျမှု၊ ကွိုးစားမှု၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယဆိုတာတှနေဲ့မွှငျ့တငျလိုကျရငျ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံအတှကျ၊ ပွညျသူ့အတှကျ မဖွဈနိုငျတဲ့ လုပျငနျးဆိုတာမရှိဘူးလို့ ဦးစှာပွောကွားလိုပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ နိုငျငံတျောနဲ့ နိုငျငံတျောအစိုးရရဲ့ အခွခေံနိုငျငံရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ လူမှုစီးပှားဘဝ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုငျရာ ဆောငျရှကျခကျြအခွအေနတှေကေို ပွညျသူ့ထံကို တငျပွမှာဖွဈပါတယျ။
၂၀၂၁ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျ နမှေ့ာ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီအနနေဲ့ နိုငျငံတျောတာဝနျကိုရယူခဲ့ရပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံရဲ့ နိုငျငံရေးစနဈက စဈမှနျ စညျးကမျးပွညျ့ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမို ကရစေီစနဈဆိုတာကို တိုငျးရငျးသားပွညျသူ တဈရပျလုံး အသိပဲဖွဈပါတယျ။ ၁၉၈၈ ခုနှဈကတညျးက ပွညျသူတှလေိုလားခဲ့တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ စနဈကို တပျမတျောအစိုးရ အနနေဲ့ အခွခေံကစပွီး တညျဆောကျပေးခဲ့ပါတယျ။ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီစနဈကို ပွညျသူကရှေးခယျြခဲ့တာဖွဈပါတယျဗြာ။ ဆိုတော့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီစနဈ ကငျြ့သုံးရာမှာလညျး လှတျလပျပွီးတရားမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲက အဲဒီစနဈရဲ့ “အသကျ” ပဲဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့လို ဒီမိုကရစေီ ပွနျလညျ တညျဆောကျစ နိုငျငံမှာဆို ပိုပွီးအရေးကွီးပါလိမျ့မယျ။ ပွီးရငျ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ၊ ရှေးကောကျပှဲစနဈတှအေရ လှတျလပျပွီးတရားမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲကသာ ကြှနျတျောတို့ပွညျသူ လူထုရဲ့ရညျမှနျးခကျြကို အောငျမွငျစမှော ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံတဈခု၊ တိုငျးပွညျတဈခုကို တညျဆောကျတဲ့အခါမှာ အုပျခြုပျရေး မဏ်ဍိုငျ၊ ဥပဒပွေုရေးမဏ်ဍိုငျ၊ တရားစီရငျရေး မဏ်ဍိုငျ စတဲ့မဏ်ဍိုငျကွီး ၃ ရပျနဲ့တညျဆောကျ ရပါတယျ။ ဒီမဏ်ဍိုငျကွီး ၃ ရပျဟာလညျး တဈခုနဲ့တဈခု ထိနျးညှိကွပျမတျခွငျး (Check and Balance) ဆိုတဲ့အလုပျကို ပီပွငျစှာဆောငျရှကျနိုငျမှ ပွညျသူလူထုပိုငျတဲ့ ဒီမိုကရစေီ (of the people)၊ ပွညျသူ လူထုအတှကျ ဒီမိုကရစေီ(for the people)၊ ပွညျသူလူထုကရှေးခယျြတဲ့ ဒီမိုကရစေီ (by the people) ဆိုတာ ဖွဈလာမှာဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ နိုဝငျဘာလမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ရှေးကောကျပှဲမှာ အဲဒီတုနျးက အာဏာရအစိုးရဖွဈတဲ့ NLD အစိုးရနဲ့ NLD ပါတီတို့ဟာ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲ အဆငျ့ဆငျ့ဖှဲ့စညျးခွငျး၊ မဲစာရငျးကောကျခွငျး၊ မဲဆှယျစညျးရုံးခွငျး၊ ရှေးကောကျပှဲ ဆိုငျရာ စစေ့ပျညှိနှိုငျးရေး ကျောမတီမြားဖှဲ့စညျးခွငျး၊ ကွိုတငျဆန်ဒမဲပေးခွငျး၊ ရှေးကောကျပှဲနေ့ ဆန်ဒမဲပေးခွငျးစတဲ့ လုပျငနျးဆောငျရှကျမှုအဆငျ့ဆငျ့မှာ NLD ပါတီ အနနေဲ့ အုပျခြုပျရေးအာဏာကို အလှဲသုံးစားပွုပွီး ဝငျရောကျစှကျဖကျ မလြျောသွဇာ သုံးပွီး မသမာမှုမြား ဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးတှပွေုလုပျခဲ့ပါတယျ။ NLD ပါတီ မဟုတျတဲ့ အခွားနိုငျငံရေးပါတီတှနေဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးတှရေဲ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး အပါအဝငျ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ လှုပျရှားဆောငျရှကျမှုတှအေားလုံးကို အုပျခြုပျရေး အာဏာ၊ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဆိုငျရာ ကနျ့သတျခကျြနဲ့ တားမွဈခကျြ တှကေို အလှဲသုံးခွငျးဖွငျ့ ကနျ့သတျထိနျးခြုပျပွီး ရှေးကောကျပှဲအနိုငျရရှိရေးကနေ နိုငျငံတျောအာဏာကို မတရားရယူဖို့ ကွိုတငျကွံစညျဆောငျရှကျ တာတှကေို လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီအနနေဲ့ နိုငျငံတျောတာဝနျကို ရယူခဲ့ရပွီး နောကျပိုငျးမှာ ရှလေု့ပျငနျးစဉျ ၅ ရပျအနကျ ပထမအခကျြဖွဈတဲ့ “ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကို ပွနျလညျဖှဲ့စညျးပွီး မဲစာရငျးမြားစဈဆေးခွငျး အပါအဝငျ လုပျဆောငျသငျ့၊ လုပျဆောငျထိုကျသညျမြားကို ဥပဒနေဲ့အညီ ဆကျလကျ ဆောငျရှကျသှားမညျ” ဆိုတဲ့အခကျြကို ဦးစားပေးဆောငျရှကျခဲ့ပါတယျ။
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အနနေဲ့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနကေ့ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲနဲ့စပျလဉျြးပွီး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခဲ့တဲ့ မွို့နယျ ၃၁၅ မွို့နယျရဲ့ မဲစာရငျးတှကေို မွို့နယျအလိုကျ အသေးစိတျစဈဆေးခဲ့ပါတယျ။ မွို့နယျအသီးသီးမှာရှိတဲ့ မဲရုံတဈခုခငျြးအလိုကျ မဲပေးခဲ့မှု အခွအေနတှေေ၊ ဆန်ဒမဲလကျမှတျတှကေို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အဖှဲ့ဝငျတှေ၊ သကျဆိုငျရာမွို့နယျအလိုကျ ယခငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲတှေ၊ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးတှေ၊ မွို့နယျလူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူးတှေ၊ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးတှေ၊ သကျဆိုငျရာနိုငျငံရေးပါတီတှကေ ကိုယျစားလှယျတှနေဲ့အတူ မွပွေငျဖှငျ့ဖောကျစဈဆေးခွငျး၊ သကျဆိုငျရာ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲမြား၊ မဲရုံမှူး၊ မဲရုံအဖှဲ့ဝငျမြားနဲ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးစဈဆေးခွငျးတှေ ဆောငျရှကျခဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုဆောငျရှကျခဲ့ရာမှာ မဲမသမာမှုစုစုပေါငျး ၁၁၃၀၅၃၉၀ (တဈဆယျ့တဈသနျး သုံးသိနျးကြျော) စဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ တပျမတျောအနနေဲ့ ရှေးကောကျပှဲ မစတငျမီမှာရော၊ ရှေးကောကျပှဲအပွီး နောကျပိုငျး မှာပါ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ လှတျလပျမှုနဲ့ တရားမြှတမှုမရှိတဲ့ အထောကျအထားတှေ၊ မဲမသမာမှုတှရှေိကွောငျး တရားဝငျ ထုတျပွနျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ တှရှေိ့ခကျြတှကေို စာရငျးဇယားတှနေဲ့ ခိုငျခိုငျမာမာ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီစနဈရဲ့ နိုငျငံရေးယဉျကြေးမှုဖွဈတဲ့ ဆှေးနှေးအဖွရှော ဖို့အတှကျ အစိုးရ၊ လှတျတျောနဲ့ တာဝနျရှိသူတှကေို တရားဝငျအသိပေးတာတှေ၊ ထုတျပွနျတာတှေ၊ သဘောထားတငျပွတာတှေ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ မအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး။ တကယျလို့ ရိုးရိုးသားသားမှားယှငျးတယျဆိုရငျ တရားဝငျဖွရှေငျးလို့ရပါတယျ။ ဥပဒနေဲ့အညီ ဆောငျရှကျနိုငျပါတယျ။ သကျသပွေနိုငျပါတယျ။ ဘာမှအကွမျးဖကျစရာ မရှိပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ ဒီမိုကရစေီနဲ့အညီ ဥပဒနေဲ့သှားနတောပါ။ နောကျဆုံးမှာ တဈဖကျက မဲမသမာမှုတှကေို ဖွရှေငျးဖို့မလုပျဘဲ မသမာမှုတှရှေိ့တဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ရလဒျခေါငျးစဉျဖွငျ့ လှတျတျောကိုအတငျး ချေါယူပွီး နိုငျငံတျောအာဏာကို အဓမ်မနညျးနဲ့ ရယူဖို့ ဆောငျရှကျလာတဲ့အတှကျ အရေးပျေါအခွအေနကွေညောပွီး နိုငျငံတျော တာဝနျကို အခွခေံဥပဒနေဲ့အညီ ထိနျးသိမျးခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့နိုငျငံရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒနေဲ့ ရှေးကောကျပှဲစနဈအရ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျတှကေို ပွညျသူကတိုကျရိုကျရှေးခယျြပါတယျ။ ဒါက ဥပဒပွေုရေးမဏ်ဍိုငျပါ။ ဒီလှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေပဲ နိုငျငံတျောရဲ့အကွီးအကဲဖွဈတဲ့ သမ်မတကို ရှေးခယျြရပါတယျ။ သမ်မတက အစိုးရအဖှဲ့တှကေိုခနျ့အပျရပါတယျ။ ဒါကအုပျခြုပျရေး မဏ်ဍိုငျ။ ဒီသမ်မတကပဲ ပွညျထောငျစုတရားသူကွီးခြုပျနဲ့ တရားသူကွီးတှကေို ခနျ့အပျ ပါတယျ။ ဒါက တရားစီရငျရေးမဏ်ဍိုငျဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံရဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲဟာ မဏ်ဍိုငျကွီး ၃ ရပျလုံးအတှကျ ရှေးကောကျပှဲလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ မဲမသမာမှုတှနေဲ့ တကျလာတဲ့ လှတျတျောကိုယျစား လှယျတှေ၊ အဲဒီလှတျတျောကိုယျစားလှယျ တှနေဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ဥပဒပွေုရေးမဏ်ဍိုငျက တိုကျရိုကျသျောလညျးကောငျး၊ သှယျဝိုကျ၍သျောလညျးကောငျး ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ အုပျခြုပျရေး မဏ်ဍိုငျနဲ့ တရားစီရငျရေးမဏ်ဍိုငျ တို့ဟာ ပွညျသူကိုဘယျလိုလုပျကိုယျစား ပွုမလဲ၊ ဘယျလိုလုပျဒီမိုကရစေီစနဈရဲ့ အနှဈသာရဖွဈတဲ့ ထိနျးညှိကွပျမတျခွငျး (Check and Balance) လုပျကွမလဲဆိုတာ သိသာထငျရှားလှပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီလို့ အမညျတပျပွီး တဈပါတီအာဏာရှငျစနဈ၊ လူတဈဦးတညျးအာဏာရှငျစနဈကို အသကျသှငျး နတောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ နိုငျငံတျောနဲ့ပွညျသူ
ရဲ့ရညျမှနျးခကျြဖွဈတဲ့ စဈမှနျစညျးကမျးပွညျ့ဝတဲ့ဒီမိုကရစေီစနဈ ပွနျလညျပျေါပေါကျရေး ဆောငျရှကျနခွေငျးပဲဖွဈပါ တယျ။
ဒီလိုဆောငျရှကျရာမှာ မဲစာရငျးတှစေဈဆေးပွီး တှရှေိ့ခကျြတှေ၊ မွပွေငျစဈဆေး တှရှေိ့ခကျြတှနေဲ့၊ သကျသအေထောကျအထားတှကေို ကြှနျတျောတို့ တဈမွို့နယျခငျြး၊ တိုငျးဒသေကွီး၊ ပွညျနယျတဈခုခငျြးအလိုကျ အသေးစိတျထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ဇူလိုငျလ အတှငျးမှာ အပွီးသတျထုတျပွနျခဲ့ပွီး ဇူလိုငျလ ၂၆ ရကျနမှေ့ာတော့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနမှေ့ာကငျြးပခဲ့တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီအထှထှေရှေေးကောကျ ပှဲဟာ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ၊ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဥပဒေ၊ သကျဆိုငျရာ လှတျတျောဥပဒေ၊ နညျးဥပဒတှေနေဲ့ ညီညှတျမှုမရှိတဲ့အပွငျ လှတျလပျပွီးတရားမြှတမှု မရှိတဲ့ ရှေးကောကျပှဲဖွဈနတောကို စဈဆေးတှရှေိ့ရလို့ ရှေးကောကျပှဲရလဒျကို ပယျဖကျြကွောငျး ကွညောခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့တညျဆဲဥပဒတှေနေဲ့အညီ ဆောငျရှကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီ စနဈကငျြ့သုံးရာမှာ လကျကိုငျထား လိုကျနာရမယျ့ ဥပဒအေထကျမှာမညျသူမှမရှိ (No Man above the Law)ဆိုတာကို လိုကျနာဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။
၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ရှေးကောကျပှဲရလဒျမြားကို ပယျဖကျြပွီးတဲ့နောကျ ကြှနျတျောတို့ ဆကျလကျ လုပျဆောငျရမှာကတော့ အရေးပျေါကာလ ပွဋ်ဌာနျးခကျြမြားနဲ့အညီ ဆောငျရှကျခွငျးနဲ့ လှတျလပျပွီးတရားမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲအသဈ ပွနျလညျကငျြးပပေး ရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုဆောငျရှကျရာမှာ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှဈ)၊ အခနျး(၁၁)၊ အရေးပျေါကာလဆိုငျရာ ပွဋ်ဌာနျးခကျြမြားအရ ဥပဒနေဲ့အညီ ဆောငျရှကျ သှားမှာဖွဈပါတယျ။ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ရှေးကောကျပှဲမှာ နိုငျငံသားစိစဈရေး ကတျပွားမရှိသူ ၄၈၆၉၄၂၇(လေးဆယျ့ရှဈသိနျး)ကြျော မဲပေးခဲ့တာတှရေ့ပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူတိုငျး မိမိရဲ့ဆန်ဒအတိုငျး မဲပေးခှငျ့ရရှိဖို့ ဦးစားပေးဆောငျရှကျမှာဖွဈလို့ နိုငျငံသားစိစဈရေးကတျရှိရမယျ့သူတိုငျး နိုငျငံသားစိစဈရေးကတျရရှိနိုငျဖို့ ကြှနျတျောတို့ ဦးစားပေး ဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနဲ့ ပွညျသူ့ အငျအားဝနျကွီးဌာနရဲ့အစီရငျခံခကျြအရ တဈနကေို့ ဦးရေ ၃၀၀ နှုနျးနဲ့ လုပျဆောငျနိုငျရငျ ၁၈ လခနျ့ ကွာမွငျ့နိုငျပါတယျ။ မွနျဆနျနိုငျသမြှ မွနျဆနျအောငျ ဆောငျရှကျလကျြ ရှိပါတယျ။ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒမှောလညျး အရေးပျေါကာလဆိုတာ အကနျ့အသတျ ရှိပါတယျ။ ပုဒျမ ၄၂၁၊ ပုဒျမခှဲ(ခ)အရ အရေးပျေါကာလ ၁ နှဈအတှငျးမှာ တာဝနျတှကေို ပွီးမွောကျအောငျဆောငျရှကျနိုငျ ခွငျးမရှိသေးရငျ နောကျထပျခွောကျလ နှဈကွိမျသာ တိုးမွှငျ့နိုငျပါတယျ။ ဒီလိုကာလအတှငျးမှာ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ လုပျဆောငျသငျ့၊ လုပျဆောငျ ထိုကျတာတှကေို ပွီးစီးအောငျ ဆောငျရှကျသှားရမှာဖွဈပါတယျ။
ပွီးရငျ ဥပဒအေရ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ပွငျဆငျခြိနျ ၆ လပေးပွီး ဆောငျရှကျရပါမယျ။ ဒီကာလမြားကို တှကျကွညျ့ရငျ လုပျငနျးရပျအားလုံးဟာ ၂၀၂၃ ခုနှဈ သွဂုတျလအတှငျး ပွီးစီးရမယျဆိုတာပါပဲ။ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီရဲ့ ရှလေု့ပျငနျးစဉျ ၅ ရပျမှာ နောကျဆုံးလုပျငနျးစဉျက “လှတျလပျပွီးတရားမြှတသော ပါတီစုံဒီမိုကရစေီအထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲအား ပွနျလညျကငျြးပပွီး အနိုငျရသညျ့ပါတီကို ဒီမိုကရစေီ စံနှုနျးမြားနဲ့အညီ နိုငျငံတျောတာဝနျအား လှဲအပျနိုငျရေး ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားရမှာဖွဈပါတယျ” ဒီလုပျငနျးစဉျအတှကျ ကြှနျတျောတို့ဟာ လှတျလပျတရားမြှတတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျဖို့အခွအေနတှေေ ဖနျတီးပေးရပါမယျ။ ကွိုတငျ ပွငျဆငျမှုတှေ ဆောငျရှကျကွရပါမယျ။ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီအထှထှေရှေေး ကောကျပှဲကို မဖွဈမနလေုပျမယျဆိုတာ ကတိပွုပါတယျ။ ပွညျသူတှရေဲ့ဆန်ဒဖွဈတဲ့ စဈမှနျစညျးကမျး ပွညျ့ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမို ကရစေီစနဈခိုငျမာအောငျ ဆောငျရှကျပေး ကွရမှာဖွဈပါတယျ။
လှတျလပျပွီးတရားမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲဖွဈလာစဖေို့ အခွခေံလိုအပျခကျြကတော့ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးနဲ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးပဲဖွဈပါတယျ။ တညျငွိမျအေးခမျြးရေး ဆိုရာမှာ နိုငျငံရေးအရ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု၊ လုံခွုံရေးအရတညျငွိမျအေးခမျြးမှု၊ စီးပှားရေး အရ တညျငွိမျအေးခမျြးမှုတှေ လိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးမှာလညျး တညျဆဲဥပဒတှေကေို လေးစားလိုကျနာပွီး စညျးကမျးပွညျ့ဝတဲ့ အလအေ့ထကောငျး တှရေရှိလာစဖေို့ ဆကျလကျဆောငျရှကျရမှာဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာ ၁၉၄၈ ခုနှဈ လှတျလပျရေးရပွီးကတညျးက ပွညျတှငျး လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခနဲ့အတူ ပေါကျဖှား လာတဲ့ နိုငျငံရေးအရ ကှဲပွားခွားနားမှုတှေ၊ အမွငျမတူညီမှုတှရှေိနေ ဆဲဖွဈပါတယျ။ ဒါတှကေို ညှိနှိုငျးဆှေးနှေး အဖွရှောခွငျးနညျးလမျးတှနေဲ့ ဆောငျရှကျခဲ့လို့ ၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈရှေးကောကျပှဲနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲတှကေို အောငျမွငျစှာ ကငျြးပနိုငျခဲ့ပွီး ကြှနျတျောတို့တိုငျးပွညျ ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါကို ရောကျခဲ့ ပါတယျ။ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ရှေးကောကျပှဲ မှာတော့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ မဲမသမာမှုတှအေပျေါမှာ ဒီညှိနှိုငျးဆှေးနှေး အဖွရှောခွငျး နညျးလမျးဆိုတာ ပြောကျဆုံးခဲ့ရပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့က စဈမှနျတဲ့ပါတီစုံဒီမို ကရစေီစနဈဖျောဆောငျဖို့ ဆောငျရှကျခဲ့ပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီနဲ့ ဖကျဒရယျစနဈကိုအခွခေံတဲ့ ပွညျထောငျစုတညျဆောကျရေးကို အာမခံ ပါတယျ။ အဓိကကတော့ သတျမှတျထားတဲ့ကာလအတှငျး ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ပွငျဆငျရမယျ့ လုပျငနျးအားလုံးအဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ ပွီးစီးရေးပဲဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ ဥပဒနေဲ့အညီ ဆကျလကျလုပျဆောငျနိုငျဖို့ ဆောငျရှကျခဲ့ပါတယျ။ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ NLD ပါတီ ဝငျအစှနျးရောကျတှနေဲ့ ၎င်းငျးပါတီကို ထောကျခံသူ အစှနျးရောကျတှအေနနေဲ့ ဥပဒနေဲ့အညီသှားဖို့၊ ဖွရှေငျးဖို့မလုပျဆောငျခဲ့ဘဲ အကွမျးဖကျ နညျးလမျးကိုသာ ရှေးခယျြခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မငျးမဲ့စရိုကျ တှဖွေဈလာအောငျ၊ လကျနကျကိုငျပုနျကနျမှု တှဖွေဈလာအောငျ လှုံ့ဆျောခဲ့ပါတယျ။ လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ကိုမထောကျခံတဲ့ အမွငျမတူသူအားလုံးကို “ငါနဲ့မတူ ငါ့ရနျသူ” သဘောထားနဲ့ ဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ ဒါတှကေို ပွနျလညျတညျငွိမျမှုရရှိအောငျ ကြှနျတျောတို့ အားလုံး ညီညီညှတျညှတျစုပေါငျး ဆောငျရှကျကွရပါမယျ။ အစိုးရရဲ့အုပျခြုပျမှု ယန်တရား ကစပွီး ပွညျသူလူထုရဲ့ နစေ့ဉျ လူနမှေုဘဝ၊ လူမှုစီးပှားဘဝကို Social Bullying၊ ဖီဆနျပုနျကနျရေးလှုပျရှားမှု(CDM) စတာတှနေဲ့ ယိုယှငျးပကျြစီးအောငျ ဆကျလကျ လုပျဆောငျနတောတှေ၊ အလုံးစုံပကျြသုဉျးရေးကို ဦးတညျဆောငျရှကျ နတောတှကေို ကြှနျတျောတို့စုပေါငျး အငျအားနဲ့ ဟနျ့တားကာကှယျရပါမယျ။
နိုငျငံရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ စီးပှားရေးနယျပယျ အသီးသီးမှာ မတညျမငွိမျဖွဈအောငျ၊ ပကျြစီးယိုယှငျးအောငျ လုပျဆောငျနတော ဖွဈပါတယျ။ အစိုးရပွုတျကရြေး၊ တပျမတျော ပွိုကှဲရေးအတှကျ ဦးတညျပွီးလုပျဆောငျ နရေုံသာမကဘဲ ကြှနျတျောတို့အားလုံး တနျဖိုး ထားရတဲ့ မွနျမာတိုငျးရငျးသား အားလုံးရဲ့ယဉျကြေးမှု၊ အစဉျအလာနဲ့ သမိုငျးကွောငျး တှကေိုပါ အခွအေမွဈကစပွီး ရညျရှယျခကျြရှိရှိ ဖကျြဆီးနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒါကို အထူးသတိရှိရှိ၊ အသိရှိရှိ မွငျတှနေို့ငျဖို့လိုပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံဟာ ဗုဒ်ဓဘာသာ အဓိက ကိုးကှယျတဲ့နိုငျငံဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၅ နှဈအတှငျးမှာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှအေတှကျ စိတျအားညှိုးငယျဖှယျရာမြားနဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ တာဝနျယူပွီးခြိနျ ကစပွီး အခွခေံဥပဒေ ပွဋ်ဌာနျးခကျြမြားနဲ့အညီ သကျဝငျယုံကွညျမှုမပကျြစရေနျ ကြှနျတျော အလေးထားဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီနရောမှာ နိုငျငံတျောတညျတံ့ ခိုငျမွဲရေး၊ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကိုလိုလားကွတဲ့ တိုငျးခဈြ၊ ပွညျခဈြ၊ နိုငျငံခဈြ၊ ပွညျသူလူထုကိုခဈြတဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ အငျအားသညျသာ အဓိက ဖွဈပါတယျ။ စဈမှနျစညျးကမျးပွညျ့ဝသော ဒီမိုကရစေီစနဈကို ကငျြ့သုံးတဲ့နိုငျငံတျော၊ ခတျေမီဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျတဲ့ နိုငျငံတျော၊ မွနျမာရဲ့အနာဂတျကို မွနျမာတိုငျးရငျးသား ပွညျသူလူထုရဲ့ ဆန်ဒနဲ့အညီ တညျဆောကျနိုငျတဲ့ နိုငျငံတျောကိုရိုးသားတဲ့နိုငျငံရေးနဲ့ ကြှနျတျောတို့ တညျဆောကျကွပါမယျ။ တိုငျးရငျးသားပွညျသူလူထုအားလုံးက ဝိုငျးဝနျး ပူးပေါငျးကူညီဆောငျရှကျပေးကွဖို့ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ လေးလေးနကျနကျ မတ်ေတာရပျခံ အပျပါတယျ။ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခ ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ ကြှနျတျောတို့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုအရ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးသဘောတူစာခြုပျ (Nationwide Ceasefire Agreement -NCA) ခြုပျဆိုခဲ့ကွပွီးဖွဈပါတယျ။ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ တောငျးဆိုမှုအပျေါမှာ အဓိက အခွခေံဆှေးနှေးပွီး စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့တာပါ။ တပျမတျောအနနေဲ့ ဒီစာခြုပျ လကျမှတျရေးထိုးထားတဲ့အတိုငျး ခိုငျမာစှာရပျတညျပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီနဲ့ ဖကျဒရယျစနဈကိုအခွခေံတဲ့ ပွညျထောငျစုကို ငွိမျးခမျြးစှာတညျထောငျသှားဖို့ ကြှနျတျောပွောလိုပါတယျ။ အကွမျးဖကျအဖှဲ့လို့ ကွညောထားတဲ့ အဖှဲ့အစညျးမြားမှအပ မညျသညျ့တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးမဆို တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့ ကြှနျတျောဖိတျချေါပါတယျ။ ဒီနရောမှာ အာဆီယံနဲ့ ဆကျဆံဆောငျရှကျတဲ့ အခွအေနကေိုပွောလိုပါတယျ။ ဧပွီလ ၂၄ ရကျနကေ့ပွုလုပျတဲ့ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေး ကြှနျတျောတကျရောကျခဲ့ပွီး သဘောတူညီခကျြ ၅ ရပျ ခမြှတျခဲ့ပါတယျ။ ဒီထဲက လုပျဆောငျသငျ့လုပျဆောငျထိုကျတာမြားကိုလညျး ဆောငျရှကျခဲ့ ပါတယျ။ အာဆီယံရဲ့ အထူးကိုယျစားလှယျအဖွဈထားရှိဖို့ မူလအဆိုပွုထားတဲ့ ၃ ဦးအနကျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဒုနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဟောငျး Mr. Virasakdi Futrakul ကို သဘောတူ ထားပွီးသားပါ။ သို့သျော အကွောငျးအမြိုးမြိုးနဲ့ အဆိုပွုမှုအသဈတှထေပျလာခဲ့လို့ ရှမေ့တိုးနိုငျဘူးဖွဈနတောပါ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ အာဆီယံ အထူးကိုယျစားလှယျ မွနျမာနိုငျငံလာရောကျပွီး တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရေးအပါအဝငျ အာဆီယံနဲ့ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျ ရေးကို အာဆီယံမူဘောငျအတှငျးက ဆောငျရှကျဖို့အသငျ့ရှိကွောငျး ပွောလိုပါတယျ။ မကွာမီရကျပိုငျးအတှငျးမှာ ပွုလုပျပွီးခဲ့တဲ့ ရှေးကောကျပှဲတှရှေိ့ခကျြတှနေဲ့ပတျသကျပွီး နိုငျငံတကာ ကိုယျစားလှယျတှကေို မကျြမွငျရှငျးပွဖို့ စီစဉျဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ တိုငျးရငျးသားပွညျသူမြားခငျဗြာ လကျရှိအခွအေနမှော ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံမှာ အခွား ကမ်ဘာ့နိုငျငံအမြားစုနညျးတူ ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါ တတိယလှိုငျးကို ခံစားနရေပါတယျ။ ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးလုပျငနျးစဉျတှကေို ပွညျသူလူထုနဲ့ပူးပေါငျးပွီး စှမျးအားကုနျကြှနျတျော တို့ဆောငျရှကျလကျြရှိနပေါတယျ။ ယခုဖွဈနတေဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါက ပထမလှိုငျး၊ ဒုတိယလှိုငျးနဲ့မတူပါဘူး။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး ပိုးတှသေူ့အရေ အတှကျ မွငျ့တကျလာသလို ပိုးတှရှေိ့သူဦးရေ ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ သဆေုံးတဲ့ ဦးရလေညျး ယခငျကထကျမွငျ့တကျလာပါတယျ။
ဒီလိုအခကျြအလကျတှကေိုထောကျပွပွီး သတငျးမီဒီယာတှနေဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာ တှမှော ယနကွေုံ့တှနေ့ရေတဲ့ တတိယလှိုငျးနဲ့ ယခငျဒုတိယလှိုငျး အခွအေနတှေကေို လှဲမှားစှာခြိနျထိုးနှိုငျးယှဉျပွီး ပွောဆိုရေးသားနတောတှကေို တှရေ့ပါတယျ။ အမှနျ တကယျဖွဈပျေါနတေဲ့ ရောဂါကူးစကျမှု အခွအေနအေရပျရပျကို ကူးစကျရောဂါ ဗဒေရှုထောငျ့က အရှိတရားနဲ့အနီး စပျဆုံးဖွဈအောငျသုံးသပျဖို့လိုပါတယျ။
ဒီရောဂါပိုးဟာ အစောပိုငျးမှာ အရှေ့ တောငျအာရှနိုငျငံတှနေဲ့ အာရှနိုငျငံတှမှော ကူးစကျရောဂါရှုထောငျ့အရ ပွငျးထနျတဲ့ သကျရောကျမှုမရှိခဲ့ဘဲ ပွငျသဈ၊ စပိနျ၊ အီတလီ ကဲ့သို့ ဥရောပနိုငျငံတှနေဲ့ အမရေိကနျ၊ ဘရာဇီးကဲ့သို့ အမရေိကတိုကျ တောငျပိုငျးနဲ့ မွောကျပိုငျးနိုငျငံတှမှော ကိုဗဈဒဏျကို အလူးအလဲခံခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပထဝီ အနအေထားအရ အလှနျဝေးလှနျးတဲ့ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့တော့ ကိုဗဈပထမလှိုငျးရဲ့ အဖြားပငျ မရိုကျခတျခဲ့ဘူးလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ဒုတိယလှိုငျးမှာ ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတဈနိုငျငံအနနေဲ့ အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ရုနျးကနျ ခဲ့ရပါတယျ။ သို့သျော ဒုတိယလှိုငျးမှာဖွဈပှားတဲ့ မြိုးကှဲတှကေ အခုဖွဈပှားနတေဲ့ မြိုးကှဲတှလေောကျ ကူးစကျမှုနှုနျးမမွနျ ဆနျတာတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ ယခု တတိယလှိုငျး မှာကတော့ မိမိတို့ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတှမှော အကွီးအကယျြ ကူးစကျမှုနှုနျးမွငျ့မားခဲ့ပွီး ဒသေတှငျးနိုငျငံ တှမှောဆိုရငျ ကိုဗဈ-၁၉ တတိယလှိုငျးဒဏျ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခံစား နရေဆဲဖွဈတာ တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ အဓိကအခကျြတဈခု အနနေဲ့ကတော့ ကူးစကျမွနျ ဗီဇပွောငျး မြိုးကှဲတှပေျေါထှကျလာခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ အခုတှရှေိ့မှုအမြားဆုံးဖွဈနတေဲ့ Delta မြိုးကှဲဟာဆိုရငျ ကူးစကျမှုအားအနနေဲ့ ယခငျမြိုးကှဲတှထေကျ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ ပိုမိုမွနျဆနျလာတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။ စတငျတှရှေိ့ခဲ့တဲ့ ကိုဗဈရောဂါပိုးဟာပှား မြားနိုငျမှု (Reproduction number) (R0) ဂဏနျးအားဖွငျ့ ၂.၄ မှ ၂.၆ အတှငျးသာရှိပမေယျ့ Alpha နှငျ့ Delta မြိုးကှဲသဈတှရေဲ့ (R0) ဂဏနျးသညျ ၄ မှ ၅ နှငျ့ ၅ မှ ၈ အသီးသီးရှိတယျလို့ သိရှိ ရပါတယျ။ (ဆိုလိုတာကတော့ တကယျလို့ (R0) ဂဏနျးက ၂ ဖွဈတယျဆိုရငျ ရောဂါပိုးရဲ့ ကူးစကျပွနျ့ပှားနှုနျးဟာ လူ ၁ ဦးမှ ၂ ဦး၊ ၂ ဦးမှ ၄ ဦး၊ ၄ ဦးမှ ၈ ဦး၊ ၈ ဦးမှ၁၆ ဦး စသဖွငျ့ (R0)ဂဏနျးအတိုငျး ဆတိုးကူးစကျသှားတာဖွဈပါတယျ။) အခု တတိယလှိုငျးမှာ မွနျမာနိုငျငံမှာတှရှေိ့ရတဲ့ မြိုးကှဲတှကေတော့ အဓိကအားဖွငျ့ စိုးရိမျဖှယျမြိုးကှဲ အုပျစုတှလေို့ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေး အဖှဲ့ကွီးက သတျမှတျထားတဲ့ Alpha, Beta နှငျ့ Delta မြိုးကှဲတှေ ဖွဈနတောတှရေ့ပါတယျ။ အခုတတိယလှိုငျးမှာဖွဈပှားတဲ့ မြိုးကှဲသဈတှရေဲ့ ပှားမြားနိုငျမှု(R0)ကိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ဒုတိယလှိုငျးမှာ ဖွဈပှားတဲ့ မြိုးကှဲတှထေကျ ဘယျလောကျထိ ပိုမိုကူးစကျနှုနျးမွနျမယျဆိုတာကို ခနျ့မှနျးကွညျ့ နိုငျပါတယျ။ အနညျးဆုံး (R0) ဂဏနျး ၄ ရှိတဲ့အတှကျ ရောဂါပိုးရဲ့ကူးစကျပွနျ့ပှားနှုနျးဟာ လူ ၁ ဦးမှ ၄ ဦး၊ ၄ ဦးမှ ၁၆ ဦး၊ ၁၆ ဦးမှ ၆၄ ဦး စသဖွငျ့ ကူးစကျသှားတာဖွဈပါတယျ။ (R0) ဂဏနျး ၈ ဆိုရငျတော့ ၁ ဦးမှ ၈ ဦး၊ ၈ ဦးမှ ၆၄ ဦး၊ ၆၄ ဦးမှ ၅၁၂ ဦး ဆတိုး ကူးစကျသှားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အခုလို အိမျနီးခငျြးနဲ့ ဒသေတှငျးနိုငျငံတှမှော ကယျြပွနျ့စှာဖွဈပှားနခွေငျးနဲ့ ဖွဈပှားနတေဲ့ မြိုးကှဲတှရေဲ့ ကူးစကျမှုနှုနျးအလှနျမွနျဆနျ နခွေငျးတို့က ပထမလှိုငျး၊ ဒုတိယလှိုငျးတှနေဲ့ မတူညီဘဲ ကြှနျတျောတို့မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ကွီးမားတဲ့စိနျချေါမှုဖွဈပျေါစပေါတယျ။
အခုလို ကူးစကျမှုနှုနျးမွငျ့မားနတေဲ့အခြိနျမှာ ပွညျသူတှအေတှကျ ကနျြးမာရေးစောငျ့ ရှောကျမှုကို အထိရောကျဆုံးပေးနိုငျတဲ့ ပွညျသူ့ဆေးရုံတှမှော လူသားအရငျးအမွဈ ပွဿနာနဲ့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈအောငျလညျး မဲမသမာမှုကွောငျ့ ပွဿနာတှနေဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ NLD အစှနျးရောကျတှနေဲ့ အဲဒီပါတီကိုထောကျခံသူ အစှနျးရောကျတှကေ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေို လှုံ့ဆျောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လူ့အဖှဲ့အစညျးအတှငျး ဒီလို ကူးစကျမှုမွငျ့တကျနခြေိနျမှာ ရောဂါပိုးစဈဆေး အတညျပွုရေးနဲ့ ကုသရေးတှမှော လူနာနဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးအငျအား အဆမတနျမညီမြှမှုက မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ကိုဗဈတတိယလှိုငျးရဲ့ ကွီးမားသညျ့ စိနျချေါမှုပငျဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုစိနျချေါမှုတှကွေားက ကိုဗဈရောဂါ ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးမှာ ရှတေ့နျးကကြ ပါဝငျဆောငျရှကျနကွေတဲ့ တာဝနျသိကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြား၊ စတေနာ့ဝနျထမျး(Volunteer) မြား၊ လူမှုအဖှဲ့အစညျး မြားနဲ့ အလှူရှငျမြားကို အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျအသိအမှတျပွုပါကွောငျး ပွောကွားလို ပါတယျ။ တဈဆကျတညျးမှာပဲ မသမာသူမြားရဲ့လှုံ့ဆျောမှုကွောငျ့ CDM မှာပါဝငျ သှားကွတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားအနနေဲ့ ဆူပူလှုပျရှားမှုနဲ့ လှုံ့ဆျောမှုမြားမှာ ဦးစီး ဦးဆောငျ ပါဝငျခဲ့သူမြားမဟုတျရငျ ပုဒျမ ၅၀၅ နဲ့ ပတျသကျလို့ ဖွလြှေော့ပေးမညျ ဖွဈကွောငျး ပွောခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ အခုကိစ်စဟာ နိုငျငံရေးကိစ်စ မဟုတျပါဘူး။ လူမှုရေး ကိစ်စ၊ လူ့အသကျနဲ့ဆိုငျတဲ့ကိစ်စဖွဈပါတယျ။
စိနျချေါမှုတှေ ဘယျလိုပဲရှိနပေါစေ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ အခကျအခဲအတား အဆီးအမြိုးမြိုး ကွားက ပွညျသူလူထု ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ တတိယလှိုငျးကို ကြျော ဖွတျနိုငျအောငျ ကွိုးစားဆောငျရှကျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ယခုလို တတိယလှိုငျးစတငျတဲ့အခါ ရှလှေို့ငျးတှမှော အတှအေ့ကွုံရှိထားတာက အားသာခကျြ ဟုဆိုရမှာဖွဈပါတယျ။ အနညျးဆုံးတော့ ရောဂါပိုးရဲ့ကူးစကျပုံကို သိရှိထားပွီးဖွဈပါတယျ။ ကာကှယျထိနျးခြုပျ ကုသနညျးတှကေိုလညျး အကြှမျးဝငျထားပွီး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကာကှယျဆေးထိုးနှံမှုကိုလညျး ရာခိုငျနှုနျးတဈခုအထိ ဆောငျရှကျ ထားနိုငျတဲ့အတှကျ ကူးစကျမှုအရှိနျကို အထိုကျအလြောကျ တနျ့စနေိုငျခဲ့ပါတယျ။ အခုလို သဘာဝဘေးနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ အစိုးရယန်တရားက ဟိုယခငျကလို ထိနျးခြုပျ ကနျ့သတျမှုနဲ့ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုတှမေရှိတော့ဘဲ သကျဆိုငျရာဒသေအလိုကျ အဆငျ့ဆငျ့ သော အစိုးရဌာန အဖှဲ့အစညျးအသီးသီးကို လှတျလပျစှာလုပျကိုငျဆောငျရှကျခှငျ့ ပွုထားတဲ့အတှကျ တုံ့ပွနျဆောငျရှကျမှုတှေ မွနျဆနျလာတာကိုလညျး တှရှေိ့ရမှာဖွဈပါ တယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ယခငျက Mask ၅ သနျးကို သကျဆိုငျရာ ပွညျနယျနဲ့ တိုငျးဒသေကွီးတှကေို ဖွနျ့ဝဖေို့အတှကျ အခြိနျတျောတျောကွာကွာ ယူခဲ့ရပမေယျ့ ယခုတော့ တပျမတျောလယောဉျတှကေို အသုံးပွုပွီး Mask ၁၂ သနျးကို ခကျြခငျြး ဖွနျ့ဝနေိုငျခဲ့ပါတယျ။ အခုလညျး လစဉျ ၁၂ သနျး ဖွနျ့ဝသှေားမှာဖွဈပါတယျ။ စီးပှားရေးနဲ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာနအနနေဲ့လညျး ကိုဗဈကုသရေးမှာလိုအပျတဲ့ Oxygen Concentrator တှေ၊ Liquid Oxygen အပါအဝငျ ဆေးနဲ့ဆေးပစ်စညျးတှေ တငျသှငျးမှုအတှကျ FDA ထောကျခံခကျြနဲ့ သှငျးကုနျ လိုငျစငျလြှောကျထားဖို့ မလိုတဲ့အပွငျ အခှနျတှကေို ဖွလြှေော့ခှငျ့ပွုပေးထားပွီးဖွဈပါတယျ။ ကူးစကျမှုကှငျးဆကျ ဖွတျတောကျ နိုငျဖို့အတှကျ ကနျ့သတျတားမွဈမှု(community restriction)တှေ သတျမှတျဆောငျရှကျ ရသလို တဈဖကျမှာလညျး ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါကွောငျ့ ကာလရှညျ နိုငျငံ့စီးပှားရေး နဈနာခဲ့ရမှုတှနေဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ လူမှုစီးပှားဘဝတှေ ပွနျလညျဦးမော့လာအောငျ ခြိနျဆပွီး လုပျဆောငျနရေတာလညျးရှိနပေါတယျ။
စောစောစဈ၊ စောစောတှေ့၊ စောစောခှဲထုတျနိုငျခွငျးက ရောဂါကူးစကျမှု ကှငျးဆကျ ဖွတျတောကျနိုငျရေးအတှကျရော၊ လူနာတှအေတှကျပါ လုပျဆောငျရမယျ့ အခကျြဖွဈ ပါတယျ။ ပိုးတှလေူ့နာတှကေို သူတို့ရဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှအေရ သငျ့တျောမယျ့ ကိုဗဈ-၁၉ ကုသမှုစငျတာတှကေို လှဲပွောငျးကုသမှုပေးနိုငျဖို့ အခြိနျနဲ့တဈပွေးညီ ပွငျဆငျ ဆောငျရှကျထားရှိပါတယျ။ ပွညျသူလူထုအနနေဲ့လညျး ရောဂါကူးစကျခံရမှု သံသယ ရှိတယျဆိုရငျ နအေိမျမှာ ဆေးမွီးတိုနဲ့ကြိတျပွီးကုသခွငျးမပွုဘဲ နီးစပျရာ ဒသေန်တရ ကနျြးမာရေးဌာနတှကေို သှားရောကျစဈဆေးမှုခံယူပွီး အဲဒီနရောတှကေတဈဆငျ့ သငျ့တျောတဲ့ ကိုဗဈကုသမှုစငျတာတှကေို ဆကျလကျလှဲပွောငျးပေးမှာဖွဈလို့ ပွညျသူ တှအေနနေဲ့ မှနျမှနျကနျကနျ သတငျးပို့ဆောငျရှကျသှားစလေိုပါတယျ။ တပျမတျော အနနေဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာလကျခံကုသဖို့နရော ၁၂၇၈ ခုမှာ လူဦးရေ ၃၉၀၀၀ ဦး လကျခံကုသနိုငျဖို့ ပွငျဆငျထားရှိသလို အရပျဘကျအနနေဲ့လညျး ၁၄၅၃ နရောမှာ လူဦးရေ ၇၁၅၀၀ ဦး လကျခံနိုငျဖို့ ပွငျဆငျထားရှိပွီးဖွဈပါတယျ။ community COVID positive Center တှကေို လိုအပျခကျြရှိသလောကျ တိုးခြဲ့ဖှငျ့လှဈနိုငျဖို့ ဆောငျရှကျပေး သှားပါမယျ။
အောကျဆီဂငျြကတော့ ကိုဗဈ-၁၉ ကုသဖို့အတှကျ မရှိမဖွဈအရေးကွီးလှပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာအရေးကွီးတာက အောကျဆီဂငျြသုံးစှဲရာမှာ ဆရာဝနျမြားရဲ့ ညှနျကွားခကျြနဲ့ အညီသာ သုံးစှဲသငျ့ပါတယျ။ ဒါကိုလညျး အခြိနျမီဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျဖို့ နိုငျငံတျောအစိုးရ အနနေဲ့ ကွိုးစားဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ တဈနိုငျငံလုံးမှာရှိတဲ့ အောကျဆီဂငျြ စကျရုံတှေ၊ တပျမတျောဆေးရုံတှေ၊ အရပျဘကျဆေးရုံတှမှောရှိတဲ့ အောကျဆီဂငျြ စကျရုံတှေ၊ ပုဂ်ဂလိကအောကျဆီဂငျြစကျရုံတှမှော အောကျဆီဂငျြထုတျလုပျမှုကို စဉျဆကျ မပွတျ monitor ပွုလုပျပွီး အမှနျတကယျလိုအပျနတေဲ့ ဆေးရုံ/ကုသမှု စငျတာတှကေို ဖွနျ့ဖွူးပေးနိုငျဖို့ အလေးထားဆောငျရှကျပေးလကျြရှိပါတယျ။ အကနျ့အသတျ ရှိလာသလို အသုံးမြားလာတဲ့အနအေထားမှာ ထိထိရောကျရောကျဖွဈအောငျ စီမံခနျ့ခှဲပေးနိုငျဖို့ ဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ ထပျမံပွီးတော့ အောကျဆီဂငျြကို အခြိနျတိုအတှငျး မြားမြားနဲ့ အရညျအသှေးမီမီ ထုတျလုပျနိုငျဖို့အတှကျ liquid oxygen ထုတျလုပျနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ liquid oxygen ကို ရနျကုနျ၊ မန်တလေး စတဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ ဖွဈပှားမှုမွငျ့မားနိုငျတဲ့ နရောတှမှော အမွနျဆုံးဆောငျရှကျပေးနိုငျရေး လုပျဆောငျလကျြ ရှိပါတယျ။ ပွညျသူ့ဆေးရုံမြား၊ ကနျြးမာရေးဌာနမြား၊ တပျမတျောဆေးရုံမြားနဲ့ နိုငျငံပိုငျ စကျရုံ၊ အလုပျရုံမြားမှာ တိုးခြဲ့တပျဆငျလကျြရှိရာ ယခုနှဈစကျတငျဘာလအတှငျးမှာ ပွညျသူ့ ဆေးရုံမြား၊ ကနျြးမာရေးဌာနမြားရဲ့ အောကျဆီဂငျြလိုအပျခကျြတှကေို ပွညျ့ဝစှာ ဖွညျ့ဆညျးပေးသှားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ကူးစကျမှုကာကှယျရေးနဲ့ ပွနျ့ပှားမှုနှုနျး လြော့ကဖြို့အတှကျ ပွညျသူတှအေနနေဲ့ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေးတှကေို အကွိမျရပွေညျ့အောငျ စနဈတကထြိုး နှံဖို့လညျးလိုအပျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၂၇ ရကျမှ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၂၁ ရကျအထိ ပွညျနယျနဲ့တိုငျးဒသေကွီး အားလုံးမှာ ကာကှယျဆေးထိုးနှံပေးခဲ့တဲ့အခါမှာ လူဦးရေ ၁၈၂၅၆၄၂ ဦး(တဈသနျး ရှဈသိနျးကြျော) (ဦးတညျလူဦးရရေဲ့ ၆.၀၈%) ကာကှယျဆေး နှဈကွိမျထိုးနှံပေးနိုငျခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ ဆကျလကျပွီး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကာကှယျဆေး တှကေို မြားမြားနဲ့မွနျမွနျ ထိုးနှံပေးနိုငျအောငျလညျး စီစဉျဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ အစိုးရအနနေဲ့ ကာကှယျဆေးတှရေရှိဖို့အတှကျ ဆကျလကျညှိနှိုငျးဝယျယူဖို့ ဆောငျရှကျ လကျြရှိသလို တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံက ဝယျယူထားတဲ့ ကာကှယျဆေးအရအေတှကျ ၄ သနျးအနကျ အခု ဇူလိုငျလ စတုတ်ထပတျမှာ ၃ သနျးရောကျရှိခဲ့ပွီးဖွဈသလို ဆေးထိုးလုပျငနျးမြား အမွနျဆောငျရှကျနပေါတယျ။ နောကျထပျကာကှယျဆေး ၃ သနျး ကလညျး သွဂုတျလအတှငျး ရောကျရှိလာမှာဖွဈလို့ ရရှိလာမယျ့ကာကှယျဆေးမြားကို ဦးတညျအုပျစုတှနေဲ့ ဦးစားပေးအစီအစဉျအလိုကျ စနဈတကထြိုးနှံပေးနိုငျဖို့ စီစဉျ ဆောငျရှကျထားရှိပွီးဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ရုရှားနိုငျငံကဝယျယူထားတဲ့ ကာကှယျဆေး ၂ သနျးဟာလညျး အသုတျလိုကျ ရောကျရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံမှ ရရှိရနျ ကနျြရှိနတေဲ့ ကာကှယျဆေးမြား ရရှိရေးအတှကျလညျး ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနကွေောငျး ပွောလိုပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံရဲ့ ကပျရောဂါကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးလုပျငနျးတှမှော ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျနကွေတဲ့နိုငျငံတှေ၊ အဖှဲ့အစညျး တှကေို လညျး အထူးကြေးဇူးတငျပါကွောငျး နဲ့ မိတျဆှနေိုငျငံတှေ၊ အဖှဲ့အစညျးတှေ အားလုံးကို ဆကျလကျပူးပေါငျး ဆောငျရှကျကွဖို့ မတ်ေတာရပျခံလိုပါတယျ။ မွနျမာပွညျတှငျးမှာပဲ ကာကှယျဆေးထုတျလုပျနိုငျဖို့ စီစဉျဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ ဒီနှဈကုနျပိုငျးမှာဆိုရငျ တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာအနနေဲ့ ကာကှယျဆေးလှမျးခွုံမှု ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးရှိမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျမှုဟာ ကမ်ဘာ့ဒသေအသီးသီးမှာ ကွီးမား ကယျြပွနျ့စှာ ဖွဈနတေဲ့အတှကျ ကာကှယျရေးနဲ့ ကုသဆေးမြား ရရှိရေးကိုလညျး နိုငျငံတိုငျးက ကွိုးစားနရေပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပွညျသူတှအေနနေဲ့ မိမိမွို့နယျ၊ ဒသေအတှငျး အခုလိုကာကှယျ ဆေးထိုးနှံခွငျးတှဆေောငျရှကျနခြေိနျမှာ ကနျြးမာရေး အသိရှိရှိနဲ့ သှားရောကျထိုးနှံ ကွဖို့လညျး အသိပေးလိုပါတယျ။
တိုငျးရငျးသားပွညျသူမြားခငျဗြာ ပွညျသူလူထုအတှငျး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ထိနျးခြုပျ ကာကှယျ ကုသရေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ အလေးထားမှုနဲ့ ပူးပေါငျးပါဝငျမှုတှေ လြော့နညျး လာခွငျးရဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျး တှထေဲမှာ လူမှုကှနျရကျကတဈဆငျ့ မဟုတျ မမှနျတဲ့ အဖကျြအမှောငျ့သတငျးတှေ ရေးသားဖွနျ့ဝခွေငျးကလညျး တဈခုအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ ဈေးကှကျအတှငျး ကနျြးမာရေး အထောကျအကူပွုပစ်စညျးတှေ ဈေးနှုနျးမွငျ့တကျလာ စဖေို့နဲ့ ပွညျသူလူထုကွား စိုးရိမျမှုကွီးထှားစဖေို့ရညျရှယျခကျြနဲ့ လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ ရုံးစာအတုတှေ ရေးသားဖွနျ့ခြိနသေလို ဆေးရုံတှကေ လူနာတှကေို လကျမခံဘဲနှငျထုတျ နတေယျ၊ အောကျဆီဂငျြတှကေို ထပျမံတငျသှငျးခွငျးမပွုဖို့ အစိုးရကပိတျပငျလိုကျတယျ၊ အသဈ ရောကျတဲ့ကာကှယျဆေးတှကေို ကမ်ဘာကအသိအမှတျမပွုဘူး၊ ထိုးရငျ အန်တရာယျရှိ နိုငျတယျ စသဖွငျ့ မဟုတျမမှနျတဲ့ သတငျးတှကေို ရေးသားဖွနျ့ဝနေတောကိုတှပေ့ါ တယျ။ တဈကြော့ပွနျ ကူးစကျမှုတှမွေငျ့တကျလာခြိနျမှာ ကာကှယျဆေးထိုးခွငျး၊ လူထူထပျတဲ့ နရောတှေ သှားရောကျတာကို တတျနိုငျသမြှရှောငျကွဉျခွငျး၊ တဈဦးခငျြး ခပျခှာခှာ နထေိုငျခွငျး၊ Mask နဲ့ Face Shield တှတေပျဆငျခွငျး၊ လကျကိုမကွာခဏ ဆေးကွောခွငျးတှကေို အရှိနျတိုးမွှငျ့ လုပျဆောငျရမယျ့အစား ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျတဲ့ ထိနျးခြုပျကာကှယျရေးဆိုငျရာ လမျးညှနျခကျြတှနေဲ့ ကိုဗဈရောဂါ စညျးကမျး ခကျြတှကေို မလိုကျနာကွဖို့၊ ကာကှယျဆေးမထိုးကွဖို့နဲ့ လူထုကွားမှာ အမြိုးမြိုးသော စုဝေးမှုတှေ ဖွဈပျေါလာအောငျ ဆငျခွငျတုံကငျးမဲ့စှာ၊ အကွံပကျစကျစှာ စညျးရုံး လှုံ့ဆျောနမှေုတှကေ ပွညျသူလူထုရဲ့ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျကို တိုကျရိုကျခွိမျးခွောကျ တာဖွဈသလို ကိုဗဈ- ၁၉ ရောဂါကို လကျနကျသဖှယျအသုံးပွုလာတဲ့ ဇီဝအကွမျးဖကျတဲ့ Bioterrorism သဘောတရားပငျဖွဈပါတယျ။ ဒီနညျးနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ နိုငျငံရေးလိုဘကို ဖွညျ့ဆညျးခွငျးဟာ ဘာသာရေးအရဆိုရငျလညျး အငျမတနျ အကညျြးတနျတဲ့ လုပျရပျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကနျြးမာရေးပွဿနာတှကေ နတေဈဆငျ့ နိုငျငံအတှငျး မတညျငွိမျမှတှေ ဖွဈပျေါအောငျ လမျးကွောငျးပေး လှုံ့ဆျောနတောဖွဈတဲ့အတှကျ လူမှုကှနျရကျပျေါက အဖကျြ အမှောငျ့လုပျရပျတှကေို ထိနျးခြုပျဖို့ဆိုတာကလညျး ကွီးမားတဲ့စိနျချေါမှု တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနနေ့ောကျပိုငျး နိုငျငံအနှံ့ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ဆူပူဆန်ဒပွမှုမြားဟာ သာမနျ ဆန်ဒပွရာကတဈဆငျ့ မငျးမဲ့စရိုကျဆနျစှာ အကွမျးဖကျဆန်ဒပွမှုကနေ လကျနကျကိုငျ တိုကျခိုကျလာတဲ့အထိ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ အပွဈမဲ့ပွညျသူမြားကို အလဈခြောငျးမွောငျး သတျဖွတျမှုတှပွေုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဘာလို့ ပွညျသူကိုသတျတာပါလဲ။ ဘာကွောငျ့ အေးခမျြးစှာနတေဲ့ ပွညျသူတှကေို တိုကျခိုကျတာပါလဲ။ ဒါကို လကျခံလို့မရပါဘူး။ အကွမျးဖကျဆူပူဆန်ဒပွမှုကို သူ့ဥပဒနေဲ့အညီ တုံ့ပွနျအရေးယူရမှာက နိုငျငံတကာ ကငျြ့စဉျအတိုငျးပါပဲ။ သစေလေောကျတဲ့ လကျနကျ၊ မိုငျးမြား အသုံးပွု တိုကျခိုကျတာ ကိုလညျး ပွုလုပျ၍မရအောငျ တုံ့ပွနျအရေးယူ ဆောငျရှကျရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ယခုအခါ အနညျးငယျသော အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားမှအပ နိုငျငံတဈဝှမျး တညျငွိမျမှုရှိနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ EAo တှအေတှကျ သတျမှတျထားတဲ့နရောမြားမှအပ ကနျြနရောမြား လုံးဝ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနနေ့ောကျပိုငျး မွနျမာနိုငျငံအနှံ့မှာ ဖွဈပျေါလကျြရှိတဲ့ အမြိုးမြိုးသော စုဝေးမှုတှကေ မွနျနှုနျးမွငျ့ ဗီဇကှဲကူးစကျမှုကို ပံ့ပိုးပေးနသေလိုဖွဈနပေါတယျ။ အဲဒီလို လူအမြားစုဝေးမှုဖွဈပျေါ စဖေို့အတှကျလညျး လူမှုကှနျရကျကတဈဆငျ့ နညျးလမျးမြိုးစုံနဲ့ လှုံ့ဆျောမှုတှေ ဆောငျရှကျနတောကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာကွီးဟာ ကပျရောဂါ အမြိုးမြိုးကို ရှေးယခငျကပငျ အောငျမွငျစှာဖွတျကြျောနိုငျခဲ့ဖူးပွီး ဖွဈပါတယျ။ ပလိပျရောဂါ၊ ကြောကျကွီးရောဂါ စတဲ့ ယခငျဖွဈပှားပွီးခဲ့တဲ့ကမ်ဘာ့ကပျ ရောဂါ အမြိုးမြိုးဟာ ယနခေ့တျေဆေးပညာ တိုးတကျမှုအခွအေနတှေမှော ထိနျးခြုပျရ လှယျကူ ပမေယျ့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါက အသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ရောဂါဖွဈတဲ့အတှကျ အသကျရှူတိုငျး၊ ရှူတိုငျး ကူးစကျနိုငျခွတှေရှေိနမှောဖွဈပါတယျ။ လူအမြားရဲ့ ပူးပေါငျး ပါဝငျမှုမရှိဘူးဆိုရငျ ကာကှယျထိနျးခြုပျဖို့ဆိုတာ ခကျခဲမယျ့ရောဂါမြိုးဖွဈ တဲ့အတှကျ ဖှံ့ဖွိုးပွီးနဲ့ဖှံ့ဖွိုးဆဲ ကမ်ဘာ့နိုငျငံကွီးတှမှောတောငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကို အသာစီးက ထိနျးခြုပျ ကာကှယျကုသနိုငျတာ မရှိသေးတာကို တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
ကနျြးမာရေးစနဈ အားကောငျးတဲ့ အမေ ရိကနျနိုငျငံက ဆေးရုံတှမှောတောငျ ခုတငျ နရော မလုံလောကျတာတှေ၊ အသကျရှူစကျနဲ့ လသေနျ့စကျ ပွတျတောကျတာတှဖွေဈခဲ့လို့ နောကျဆုံး မိမိနအေိမျမှာပဲ ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျနဲ့ ကုသကွရတဲ့အခွအေနေ အထိ ရောကျရှိခဲ့ကွပါတယျ။ အောကျဆီဂငျြ ပွဿနာဆိုတာကလညျး Outbreak ဖွဈတဲ့ နိုငျငံတိုငျး မလှဲမရှောငျသာကွုံတှရေ့ မယျ့အခကျအခဲဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့အိမျနီး ခငျြးနိုငျငံဖွဈတဲ့ အိန်ဒိယနဲ့ အငျဒိုနီးရှားတို့မှာလညျးပဲ အလူးအလဲ ရငျဆိုငျနကွေရတာကို တှရှေိ့ရပါတယျ။
ယနေ့ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေး ကောငျစီအစိုးရဟာ ကိုဗဈရောဂါထိနျးခြုပျ ကာကှယျ ကုသရေးနဲ့ပတျသကျပွီး တတျစှမျးသမြှဆောငျရှကျဖို့ ရှလေု့ပျငနျးစဉျ ၅ ရပျမှာ ထညျ့သှငျး ဖျောပွထားပွီးဖွဈပါတယျ။ ကပျရောဂါစီမံခနျ့ခှဲရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျးတှေ၊ ကနျ့သတျမှုတှကေို တတျစှမျးသမြှ ဖွလြှေော့ပေးထားပွီဖွဈသလို လိုအပျတဲ့ ပွငျဆငျ မှုတှကေိုလညျး ဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ ပွညျသူလူထုအတှငျး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကူးစကျမှုကှငျးဆကျ ဖွတျတောကျနိုငျဖို့အတှကျ အမြားပွညျသူရုံးပိတျရကျတှနေဲ့ကိုကျညှိ ပွီးတော့ ဇူလိုငျလ ၁၇ ရကျမှ သွဂုတျလ ၁ ရကျနအေ့ထိ တဈဆကျတဈစပျတညျး ရုံးပိတျ ရကျရှညျအဖွဈသတျမှတျပွီး ကူးစကျမှု ကှငျးဆကျဖွတျတောကျနိုငျဖို့ စီမံဆောငျရှကျခဲ့ ရာမှာ နိုငျငံရေးအစှနျးရောကျ အဖကျြသမားအခြို့မှအပ ပွညျသူလူထုတဈရပျလုံးက ဝိုငျးဝနျးကူညီဆောငျရှကျခဲ့တာဟာ ကြှနျတျောတို့ပွညျသူလူထုရဲ့ စှမျးအား၊ ခြီးကြူးဖှယျ ကောငျးတဲ့လုပျဆောငျခကျြဖွဈပါတယျ။ ဇူလိုငျလ ၂၃ ရကျနကေ့ စလို့ ဖွဈပှားမှုနှုနျးဟာ ၄၀ .၈၂ ရာခိုငျနှုနျး ကနေ ၂၉ ရကျနမှေ့ာ ၃၄.၇၅ ရာခိုငျနှုနျး အထိကဆြငျးလာပါတယျ။ ဒါကို ဒီထကျ ပိုကဆြငျးရေး ဆောငျရှကျဖို့လိုပါတယျ။ ရောဂါကှငျးဆကျကို ထိထိ ရောကျရောကျ ဖွတျတောကျနိုငျဖို့ နောကျထပျတဈပတျ ထပျမံပွီး ရုံးပိတျရကျရှညျ ကွညောပါမယျ။ ဒီလိုဆောငျရှကျရာမှာလညျး စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ၊ ကုနျထုတျလုပျငနျး တှေ မထိခိုကျစေ ဖို့ဆောငျရှကျသှားပါမယျ။ ကြှနျတျောတို့ ပွညျသူလူထုနဲ့ အတူရှိနမေယျ။ ပွညျသူလူထုကို စှမျးအားပွညျ့ကာကှယျပေးမယျ။ အားလုံးလကျတှဲညီညီ စုပေါငျး ဆောငျရှကျပေးခွငျးဖွငျ့ ဒီကပျရောဂါကို မွနျမာတှေ အောငျနိုငျရမယျလို့ လေးနကျစှာ ပွောကွားလိုပါတယျ။
နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီအနနေဲ့ နိုငျငံတျောတာဝနျတှေ ထမျးဆောငျရာမှာ ရှလေု့ပျငနျးစဉျ ၅ ရပျ၊ ဦးတညျခကျြ ၉ ရပျ ခမြှတျပွီး ဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ ကမ်ဘာမှာ လူဦးရသေနျး ၇၀၀၀ ခနျ့ရှိပွီး စား၊ ရေ၊ ရိက်ခာ လိုအပျခကျြဟာ မွငျ့မားနေ ဆဲဖွဈပါတယျ။ အခုလို ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ ကာလမှာလညျး အခွားဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးတှကေို လြှော့ခြ နိုငျပမေယျ့ စားသောကျရေးကိစ်စတှကေတော့ ရှိနေ၊ လိုအပျနဆေဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကို ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ အသုံးခနြိုငျရမှာဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံဟာ စိုကျပြိုး၊ မှေးမွူရေးကိုအခွခေံတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျနရေတဲ့ ကြေးလကျနေ ပွညျသူလူထု ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျောရှိတဲ့ နိုငျငံပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးမှာ အထှကျနှုနျးတိုးစဖေို့ အခွခေံလိုအပျခကျြ တှဖွေဈတဲ့ “မြိုး၊ မွေ၊ ရေ၊ နညျး” ဆိုတဲ့ မြိုးကောငျးမြိုးသနျ့တှရေရှိဖို့၊ သဘာဝမွသွေဇာ၊ ဓာတျမွသွေဇာတို့ပေါငျးစပျပွီး ကောငျးမှနျတဲ့ စိုကျပြိုးမွမြေား ဖျောထုတျ ပေးတာတို့၊ စိုကျပြိုးရရေရှိအောငျ ဆောငျရှကျပေးတာတို့၊ ကောငျးမှနျတဲ့စိုကျနညျး စနဈတှရေရှိအောငျ ဆောငျရှကျပေးတာတှကေို လုပျဆောငျပေးလကျြရှိပါတယျ။ မှေးမွူရေးလုပျငနျးမြား အနနေဲ့ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံရဲ့ဒသေအမြားစုမှာ မှေးမွူလို့ရတဲ့ ကွကျ၊ ဝကျ၊ ဆိတျ၊ နှား၊ ငါး စတဲ့မှေးမွူရေး လုပျငနျးတှကေို အားပေးဆောငျရှကျသှားရပါမယျ။ အရေးကွီးတာက စနဈကနြတဲ့ မှေးမွူရေးစနဈဖွဈဖို့ပါပဲ။ မွစိမျးရောငျ အသားကဏ်ဍ မှေးမွူရေးကြေးရှာ ထူထောငျခွငျး၊ မြိုးကောငျးမြိုးသနျ့မှေးမွူရေး တိရစ်ဆာနျမြားထုတျလုပျခွငျး၊ နိုငျငံအတှငျး ထှကျရှိတဲ့ကုနျကွမျးမြားကို အသုံးပွုပွီး မှေးမွူရေးအစာ လုံလောကျစှာထုတျလုပျခွငျး လုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျသှားရပါမယျ။ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေးလုပျငနျးတှေ တိုးခြဲ့ ဆောငျရှကျနပေမေယျ့ လိုအပျခကျြတှရှေိ နပေါသေးတယျ။ ဥပမာဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံရဲ့ ခညျြမြှငျနဲ့အထညျလုပျငနျးမှာ နှဈစဉျ ပွညျပကတငျသှငျးရတဲ့ ခညျြမြှငျနဲ့အထညျ ဒျေါလာ သနျး ၁ ထောငျကြျောဖိုးခနျ့ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာ ဝါစိုကျပြိုးနိုငျ တဲ့ မွေ၊ ရေ၊ရာသီဥတုတှရှေိပွီးဖွဈပါတယျ။ လုပျလညျးလုပျနိုငျပါတယျ။ လုပျလညျးလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဝတျရေးဟာလညျး လူတိုငျးအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပွညျတှငျးမှာ ဝါစိုကျပြိုးထုတျလုပျမှု အားပေးရေး၊ ခညျြမြှငျနဲ့အထညျလုပျငနျး မြားအားပေးရပါမယျ။ မွဈရတေငျစီမံကိနျးတှေ၊ ဆညျရသေောကျစီမံကိနျးမြား၊ ဝါ စိုကျပြိုးရေးတိုးခြဲ့သှား ရပါမယျ။ အလားတူ စားအုနျးဆီတငျသှငျးနရေတာတှေ၊ နို့ထှကျပစ်စညျးတငျသှငျး နရေတာတှကေို ပွညျတှငျးမှာပဲ ဖူလုံအောငျပွုလုပျပွီး ဆောငျရှကျသှားကွရပါမယျ။ တနင်ျသာရီတိုငျးအောကျပိုငျး မွိတျ၊ ဘုတျပွငျး၊ ကော့သောငျးဒသေတှမှော ဆီအုနျး အပွညျ့အဝ တိုးခြဲ့စိုကျပြိုးရေး၊ နှမျး၊ မွပေဲသာမက မုနျညငျး၊ နကွော၊ ပနျးနှမျး စတဲ့ ဆီထှကျသီးနှံမြား တိုးခြဲ့စိုကျပြိုးရေး၊ အထှကျနှုနျးတိုးရေးလုပျကွရပါမယျ။ ရာသီဥတုနဲ့ မွအေခွအေနေ ကောငျးတဲ့နရောမြားမှာ နို့စားနှားမှေးမွူ ရေးမြားဆောငျရှကျပွီး နို့ထှကျပစ်စညျး ပွညျတှငျးမှာလုံလောကျပွီး ပိုလြှံအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျပါတယျ။ “ပွညျတှငျးဖွဈကို အားပေးပါ” ဆိုတဲ့ ဆောငျပုဒျအတိုငျး ပွညျတှငျးကုနျထုတျလုပျမှုမြား၊ ပွညျတှငျးထုတျကုနျပစ်စညျးမြားကို အားပေးကွဖို့လိုပါတယျ။ ပွညျတှငျးမှာ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးမြားဖျောထုတျခွငျးဖွငျ့ အလုပျအကိုငျ အခကျအခဲကွောငျ့ ပွညျပသို့ထှကျခှာ အလုပျလုပျနရေသူမြားအတှကျ အလုပျအကိုငျမြားရရှိစနေိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ စကျသုံးဆီ မြား သုံးစှဲမှုလြှော့ခနြိုငျရေး၊ အခွားစှမျးအငျအရငျးအမွဈမြား အသုံးပွုနိုငျရေးတို့ကို ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံဟာ စိုကျပြိုး၊ မှေးမွူရေး လုပျငနျးတှကေို အဓိကထား လုပျကိုငျနတေဲ့နိုငျငံဖွဈပမေယျ့ စိုကျပြိုးရေး တက်ကသိုလျ တဈခုနဲ့ မှေးမွူရေးနဲ့ ဆေးကုသရေးတက်ကသိုလျတဈခုသာရှိပါတယျ။ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေး လုပျငနျးတှကေို နညျးစနဈတကြ၊ ခတျေမီအောငျဆောငျရှကျနိုငျဖို့ အသိပညာရှငျ၊ အတတျပညာရှငျမြားလိုအပျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တိုငျးဒသေကွီးနဲ့ ပွညျနယျတှမှောရှိတဲ့ စိုကျပြိုး၊ မှေးမွူရေး ကြောငျးတှကေို သိပ်ပံ၊ ကောလိပျအဆငျ့တိုးမွှငျ့ဖို့၊ ကြောငျးမြား ဖှငျ့လှဈပွီး အသိပညာရှငျ၊ အတတျပညာရှငျနဲ့ ကြှမျးကငျြသူမြား ပျေါထှကျလာရေး ဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေးလုပျငနျးတှကေို ခတျေမီစဖေို့၊ စကျမှုအခွခေံစနဈကို ပွောငျးလဲနိုငျဖို့နဲ့ အခွားကဏ်ဍတှမှောလညျး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ လာစဖေို့ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာ ကဏ်ဍမှာလညျး မကျြခွညျမပွတျဆောငျရှကျနိုငျရေး သိပ်ပံနဲ့ နညျးပညာဝနျကွီးဌာနကို ပွနျလညျဖှဲ့စညျး ဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။
စိုကျပြိုးရေးအဓိကထားတဲ့အတှကျ စိုကျပြိုးရေးထှကျကုနျ ဈေးကှကျကလညျး သခြောဖို့ လိုပါတယျ။ နယျစပျနဲ့ပုံမှနျ ကုနျသှယျမှုလမျးကွောငျးမြားမှာ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ရောငျးမရတာမြားဖွဈပွီး ပကျြစီးဆုံးရှုံးမှုမြားနဲ့ နှဈစဉျနီးပါးကွုံကွရပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခတျေမီသိုလှောငျရေးစနဈ၊ တနျဖိုးမွငျ့ထုတျလုပျရေးစနဈမြား ကွိုးစားလုပျဆောငျ ရပါမယျ။ ဥပမာ ကွကျသှနျနီဈေးကှကျမှာ ကွကျသှနျနီ ရိုးရိုးပို့ကုနျအပွငျ ကွကျသှနျမှုနျ့၊ ကွကျသှနျ ကွျော၊ ကွကျသှနျနှဈမြား ပွုလုပျတာမြိုး ဆောငျရှကျရပါမယျ။ တောငျသူတှေ စိုကျပြိုး ရေးထုတျကုနျ၊ မှေးမွူရေးထုတျကုနျမြားအတှကျ အရှုံးမပျေါရလအေောငျ ကွိုးစား ဆောငျရှကျရပါမယျ။ ကြှနျတျောတို့ Agro Base Industry စိုကျပြိုးရေးအခွခေံ စကျမှုလုပျငနျးကို သှားရပါမယျ။
၂၀၁၄ ခုနှဈ သနျးခေါငျစာရငျးနဲ့ ၂၀၁၉ ကွားဖွတျသနျးခေါငျစာရငျးအရ အသကျ ၅ နှဈနဲ့ အထကျ ၈.၁ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ဟာ ကြောငျးမနဖေူးတာကိုတှရေ့ပါ တယျ။ ဒါ့အပွငျ အသကျ ၂၅ နှဈနဲ့အထကျ အရှယျရောကျပွီးသူမြားထဲမှာ အလယျတနျးအဆငျ့နဲ့ ၎င်းငျးအဆငျ့အောကျ ပညာ သငျကွားခဲ့ရသူပေါငျး ၁၈.၂ သနျးရှိပါတယျ။ နိုငျငံ့လူဦးရရေဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံလောကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာနိုငျငံရဲ့ ပညာရညျမွှငျ့တငျရေး၊ ပွညျသူလူထုရဲ့ပညာရညျမွှငျ့တငျ ရေးကို ကြှနျတျောတို့ ကွိုးကွိုးစားစား လုပျကိုငျရမှာဖွဈကွောငျး ပွနပေါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ပညာရေးနဲ့ပတျသကျပွီး အမြိုးသားရေးတာဝနျတဈရပျသဖှယျ ဆောငျရှကျလကျြ ရှိပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီကို ခိုငျမာစဖေို့၊ တိုငျးပွညျတိုးတကျစဖေို့ဆိုရငျ ပညာတတျမြားစှာ ရှိဖို့လိုပါတယျ။ သိပ်ပံ ပညာရှငျ၊ နညျးပညာပညာရှငျ၊ ဥပဒေ ပညာရှငျ၊ စီးပှားရေး ပညာရှငျမြား၊ ဆေးပညာရှငျမြား မှေးထုတျပေးရပါမယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အဆငျ့မွငျ့ပညာရေးကို လကျတှကေ့ကြအြားပေးကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။ ပညာရေးကိုအားပေးဖို့ လိုပါတယျ။ အခကျအခဲ တှကွေားက ပညာရေးခါးဆကျမပွတျဖို့ ကြှနျတျောကွိုးစားပွီး ကြောငျးတှေ ပွနျဖှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ ယခု ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါကွောငျ့ ခတ်ေတပွနျပိတျထားရပါတယျ။ ကြောငျးမြားဖှငျ့လှဈခြိနျက ပညာရေးနဲ့ပတျသကျပွီး အလေးထားဆောငျရှကျခဲ့ကွတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမြား၊ ပညာရေးဝနျထမျးမြား၊ မိဘ ပွညျသူမြား၊ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား အားလုံးကို အထူးကြေးဇူးတငျကွောငျး ပွောကွားလိုပါတယျ။ ပညာသငျကွားနသေူ လူငယျလူရှယျမြားအားလုံး ကြောငျးပညာကိုသာ အာရုံစိုကျအလေးထားသငျကွား လလေ့ာကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့နိုငျငံရဲ့အခွခေံနဲ့ ပွညျသူအမြားစုလုပျကိုငျနရေတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျး ဖွဈတဲ့ စိုကျပြိုး၊ မှေးမွူရေးလုပျငနျးတှေ ဆောငျရှကျရာမှာ လကျတှကေ့ကြ၊ အစုအဖှဲ့အလိုကျ အထောကျအကူပွုနိုငျဖို့အတှကျ သမဝါယမနဲ့ကြေးလကျဖှံ့ဖွိုးရေး ဝနျကွီးဌာနကို အသဈ ဖှဲ့စညျးခဲ့ပါတယျ။ ဒီဝနျကွီးဌာနအနနေဲ့ ယခငျစနဈဟောငျး သမဝါယမစနဈလို လုပျကိုငျ ဆောငျရှကျမှာ မဟုတျဘဲ ပွညျသူလူထုအနနေဲ့လုပျငနျးတူမြား၊ အကြိုးတူမြား ကိုယျတိုငျ ပါဝငျဆောငျရှကျမယျ့ ပွညျသူ့အခွပွေုစနဈသာဖွဈပါတယျ။ ဖှံ့ဖွိုးပွီးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံ မြားမှာပငျလြှငျ ဒီစနဈကောငျး၊ သမဝါယမစနဈ ကိုကငျြ့သုံးလကျြရှိပါတယျ။ ယခုကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာလညျး စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးတှကေို ထိထိရောကျရောကျ ဆောငျရှကျနိုငျဖို့ စိုကျပြိုးထုတျလုပျရေး သမဝါယမအသငျးမြား ဖှဲ့စညျးဆောငျရှကျ လကျြရှိပွီး ထိရောကျမှုရှိပါတယျ။
ကိုဗဈ-၁၉ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကာလမှာ တဈကမ်ဘာလုံးကုနျထုတျလုပျမှု၊ ဝနျဆောငျ မှုကဏ်ဍတှမှော အခကျအခဲတှရှေိကွပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာလညျး ရှိနပေါတယျ။ အနိမျ့ဆုံးအဆငျ့ကတော့ ပွညျသူတှရေဲ့ အခွခေံစားသောကျကုနျလုပျငနျးတှေ၊ ကနျြးမာရေးဝနျဆောငျမှု၊ ပို့ဆောငျဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျမှုနဲ့ လူမှုဖူလုံရေးဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးတှမှောတော့ လုံလောကျမှုရှိအောငျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကနျြးမာရေးဆိုရာမှာလညျး အားကစား၊ ကွံ့ခိုငျရေးတို့နဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျ။ အားကစား မွှငျ့တငျခွငျးဟာ နိုငျငံ့ဂုဏျကို တကျစပေါတယျ။ ကာယစှမျးပကားသာမက စိတျဓာတျ စှမျးပကားပါ မွှငျ့တငျပေးတာပါ။ ကိုဗဈကွောငျ့ ကနျ့သတျမှုမြား ရှိနပေမေယျ့လညျး အားကစားမွှငျ့တငျရေး မကျြခွညျမပွတျကွညျ့ပွီး ဆောငျရှကျပေးနပေါတယျ။ ပွညျနယျနဲ့ တိုငျးဒသေအားလုံးမှာ အားကစားကှငျး၊ အားကစားရုံမြား အဆငျ့မီမီရှိရေး ဆောငျရှကျ နပေါတယျ။ အားကစားမွှငျ့တငျမယျဆို လူငယျတှရေဲ့ အငျအားဟာ အဓိကကတြဲ့အတှကျ လူငယျနဲ့အားကစားကဏ်ဍကို အားပေးဆောငျရှကျသှားပါမယျ။
နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီအနနေဲ့ နိုငျငံတျောကိုတာဝနျယူခဲ့တာ (၆)လရှိပွီ ဖွဈပါတယျ။ ရှလေု့ပျငနျးစဉျ အမှတျ(၁)အရလိုအပျတဲ့စဈဆေးမှုမြား ဆောငျရှကျပွီးဖွဈလို့ တာဝနျရှိသူမြားကို ဥပဒနှေငျ့အညီ အရေးယူဆောငျရှကျနပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကနျြရှိနတေဲ့ ရှလေု့ပျငနျးစဉျမြားနဲ့ ဦးတညျခကျြမြားကို ထိရောကျစှာ အကောငျအထညျ ဖျောနိုငျစဖေို့အတှကျ ပွညျထောငျစုအဆငျ့၊ ပွညျနယျနဲ့တိုငျးဒသေကွီးအဆငျ့ အုပျခြုပျရေး ပိုငျးဆိုငျရာမြား ပွငျဆငျဖှဲ့စညျးဆောငျရှကျ သှားဖို့ရှိကွောငျး အသိပေးလိုပါတယျ။
(၁) နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီအနနေဲ့ စဈမှနျစညျးကမျးပွညျ့ဝတဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီစနဈအတှကျ အာမခံပွီးဖွဈပါတယျ။ အရေးပျေါကာလလုပျဆောငျရမယျ့ တာဝနျတှပွေီးဆုံးတဲ့အခါ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ကငျြးပပါမယျ။ ကွိုတငျပွငျဆငျရမှာတှေ မြားစှာရှိပါတယျ။ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးလုပျငနျးတှမှော ဒီမိုကရစေီနဲ့ တိုငျးပွညျအေးခမျြးသာယာရေးလိုလားတဲ့ မိဘပွညျသူအားလုံးက ဝိုငျးဝနျးကူညီ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပေးကွပါ။
(၂) ကိုဗဈ-၁၉ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကို ပွညျသူ၊ အစိုးရနဲ့ အဖှဲ့အစညျးအားလုံး ပူးပေါငျး စှမျးအားနဲ့ ရငျဆိုငျကွပါမယျ၊ ကြျောလှားကွပါမယျ။ ကြှနျတျောတို့ အခကျအခဲတှပေဲ ရှိပါစေ အောငျမွငျနိုငျ ရပါမယျ။ အောငျစိတျသှငျးပွီး ကြျောလှား ကွပါစို့။
(၃) ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အခွခေံစီးပှား လုပျငနျးတှဖွေဈတဲ့ စိုကျပြိုး၊ မှေးမွူရေး ကဏ်ဍတှကေို တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ အနညျးဆုံးအဆငျ့ ကပျရောဂါဖွဈနတေဲ့ အခုလိုကာလမှာ အခွခေံလိုအပျခကျြတှေ ဖူလုံမှုရှိအောငျဆောငျရှကျပါမယျ။ တိုငျးပွညျရဲ့ အားဟာပွညျတှငျးမှာသာရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အားလုံး “အရေးကွီးပွီဖွဈလို့ သှေးစညျးကွပါစို့” ဝိုငျးဝနျးပူးပေါငျးဆောငျရှကျပွီး “စုပေါငျး ညီညာအောငျကွောငျးဖွာ” ရပါမယျဗြာ..
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ (၆)လပြည့် နိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဒီနေ့ဟာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက နိုင်ငံတော်ရဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ (၆)လပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေအားလုံး ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဘေးမှ အမြန်ဆုံးကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာကြပါစေ လို့ ဦးစွာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကို အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး လက်တွဲပြီး စုပေါင်းညီညွတ်စွာ ရင်ဆိုင်ကြ ရပါမယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့မူဝါဒကတော့ လူ့အသက်ထက် အရေးကြီးတာမရှိပါဘူး။ အဓိကကတော့ ကျန်းမာရေးပါ။ ကျန်းမာမှအလုပ်လုပ်နိုင်မှာ၊ ကျန်းမာမှပညာ သင်ကြား နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးထက် အရေးကြီးတာ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ် တွေမှာ ဘာကန့်သတ်ချက်မှမထားပါဘူး။ ရှိသမျှသော လူ့စွမ်းအား၊ ပစ္စည်းစွမ်းအား၊ ဉာဏစွမ်းအားတွေနဲ့ကာကွယ်ကြပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အောင်ကိုအောင်မြင်ကြရပါမယ်။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးရဲ့ စုပေါင်းညီညွတ်မှုနဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကို အောင်မြင်ရမယ်။ စစ်မှန်စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ရေး အောင်မြင်ရပါမယ်။ ဒီလိုအောင်စိတ်ကို စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ ကြိုးစားမှု၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယဆိုတာတွေနဲ့မြှင့်တင်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်၊ ပြည်သူ့အတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဆိုတာမရှိဘူးလို့ ဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ အခြေခံနိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်အခြေအနေတွေကို ပြည်သူ့ထံကို တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် နေ့မှာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုရယူခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်က စစ်မှန် စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမို ကရေစီစနစ်ဆိုတာကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး အသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက ပြည်သူတွေလိုလားခဲ့တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို တပ်မတော်အစိုးရ အနေနဲ့ အခြေခံကစပြီး တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြည်သူကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဆိုတော့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးရာမှာလည်း လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက အဲဒီစနစ်ရဲ့ “အသက်” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည် တည်ဆောက်စ နိုင်ငံမှာဆို ပိုပြီးအရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေအရ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကသာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ လူထုရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခု၊ တိုင်းပြည်တစ်ခုကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်၊ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် စတဲ့မဏ္ဍိုင်ကြီး ၃ ရပ်နဲ့တည်ဆောက် ရပါတယ်။ ဒီမဏ္ဍိုင်ကြီး ၃ ရပ်ဟာလည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ထိန်းညှိကြပ်မတ်ခြင်း (Check and Balance) ဆိုတဲ့အလုပ်ကို ပီပြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှ ပြည်သူလူထုပိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ (of the people)၊ ပြည်သူ လူထုအတွက် ဒီမိုကရေစီ(for the people)၊ ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ (by the people) ဆိုတာ ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ အဲဒီတုန်းက အာဏာရအစိုးရဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရနဲ့ NLD ပါတီတို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မဲစာရင်းကောက်ခြင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ဆန္ဒမဲပေးခြင်းစတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်မှာ NLD ပါတီ အနေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး ဝင်ရောက်စွက်ဖက် မလျော်သြဇာ သုံးပြီး မသမာမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီ မဟုတ်တဲ့ အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကို အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ တားမြစ်ချက် တွေကို အလွဲသုံးခြင်းဖြင့် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိရေးကနေ နိုင်ငံတော်အာဏာကို မတရားရယူဖို့ ကြိုတင်ကြံစည်ဆောင်ရွက် တာတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို ရယူခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ရပ်အနက် ပထမအချက်ဖြစ်တဲ့ “ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး မဲစာရင်းများစစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင် လုပ်ဆောင်သင့်၊ လုပ်ဆောင်ထိုက်သည်များကို ဥပဒေနဲ့အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်” ဆိုတဲ့အချက်ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အနေနဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြို့နယ် ၃၁၅ မြို့နယ်ရဲ့ မဲစာရင်းတွေကို မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ မြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ မဲရုံတစ်ခုချင်းအလိုက် မဲပေးခဲ့မှု အခြေအနေတွေ၊ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွေကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် ယခင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲတွေ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတွေ၊ မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူးတွေ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူ မြေပြင်ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ၊ မဲရုံမှူး၊ မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းစစ်ဆေးခြင်းတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ မဲမသမာမှုစုစုပေါင်း ၁၁၃၀၅၃၉၀ (တစ်ဆယ့်တစ်သန်း သုံးသိန်းကျော်) စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မစတင်မီမှာရော၊ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်ပိုင်း မှာပါ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ အထောက်အထားတွေ၊ မဲမသမာမှုတွေရှိကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်တွေကို စာရင်းဇယားတွေနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ ဆွေးနွေးအဖြေရှာ ဖို့အတွက် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို တရားဝင်အသိပေးတာတွေ၊ ထုတ်ပြန်တာတွေ၊ သဘောထားတင်ပြတာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်လို့ ရိုးရိုးသားသားမှားယွင်းတယ်ဆိုရင် တရားဝင်ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှအကြမ်းဖက်စရာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီနဲ့အညီ ဥပဒေနဲ့သွားနေတာပါ။ နောက်ဆုံးမှာ တစ်ဖက်က မဲမသမာမှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့မလုပ်ဘဲ မသမာမှုတွေ့ရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လွှတ်တော်ကိုအတင်း ခေါ်ယူပြီး နိုင်ငံတော်အာဏာကို အဓမ္မနည်းနဲ့ ရယူဖို့ ဆောင်ရွက်လာတဲ့အတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီး နိုင်ငံတော် တာဝန်ကို အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်အရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပြည်သူကတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ပါတယ်။ ဒါက ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်ပါ။ ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပဲ နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ သမ္မတကို ရွေးချယ်ရပါတယ်။ သမ္မတက အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုခန့်အပ်ရပါတယ်။ ဒါကအုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်။ ဒီသမ္မတကပဲ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်နဲ့ တရားသူကြီးတွေကို ခန့်အပ် ပါတယ်။ ဒါက တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာ မဏ္ဍိုင်ကြီး ၃ ရပ်လုံးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မဲမသမာမှုတွေနဲ့ တက်လာတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်တွေ၊ အဲဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်က တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်နဲ့ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် တို့ဟာ ပြည်သူကိုဘယ်လိုလုပ်ကိုယ်စား ပြုမလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ ထိန်းညှိကြပ်မတ်ခြင်း (Check and Balance) လုပ်ကြမလဲဆိုတာ သိသာထင်ရှားလှပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလို့ အမည်တပ်ပြီး တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်၊ လူတစ်ဦးတည်းအာဏာရှင်စနစ်ကို အသက်သွင်း နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူ
ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ စစ်မှန်စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်ရေး ဆောင်ရွက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ မဲစာရင်းတွေစစ်ဆေးပြီး တွေ့ရှိချက်တွေ၊ မြေပြင်စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့၊ သက်သေအထောက်အထားတွေကို ကျွန်တော်တို့ တစ်မြို့နယ်ချင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းအလိုက် အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ အတွင်းမှာ အပြီးသတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့မှာတော့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက် ပွဲဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ၊ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေနဲ့ ညီညွတ်မှုမရှိတဲ့အပြင် လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နေတာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရလို့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျင့်သုံးရာမှာ လက်ကိုင်ထား လိုက်နာရမယ့် ဥပဒေအထက်မှာမည်သူမှမရှိ (No Man above the Law)ဆိုတာကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို ပယ်ဖျက်ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရမှာကတော့ အရေးပေါ်ကာလ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအသစ် ပြန်လည်ကျင်းပပေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)၊ အခန်း(၁၁)၊ အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားမရှိသူ ၄၈၆၉၄၂၇(လေးဆယ့်ရှစ်သိန်း)ကျော် မဲပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတိုင်း မိမိရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း မဲပေးခွင့်ရရှိဖို့ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်လို့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ရှိရမယ့်သူတိုင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ရရှိနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီရင်ခံချက်အရ တစ်နေ့ကို ဦးရေ ၃၀၀ နှုန်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ရင် ၁၈ လခန့် ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ မြန်ဆန်နိုင်သမျှ မြန်ဆန်အောင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်း အရေးပေါ်ကာလဆိုတာ အကန့်အသတ် ရှိပါတယ်။ ပုဒ်မ ၄၂၁၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အရေးပေါ်ကာလ ၁ နှစ်အတွင်းမှာ တာဝန်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင် ခြင်းမရှိသေးရင် နောက်ထပ်ခြောက်လ နှစ်ကြိမ်သာ တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကာလအတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်၊ လုပ်ဆောင် ထိုက်တာတွေကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးရင် ဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ချိန် ၆ လပေးပြီး ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ ဒီကာလများကို တွက်ကြည့်ရင် လုပ်ငန်းရပ်အားလုံးဟာ ၂၀၂၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း ပြီးစီးရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ရပ်မှာ နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်က “လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား ပြန်လည်ကျင်းပပြီး အနိုင်ရသည့်ပါတီကို ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများနဲ့အညီ နိုင်ငံတော်တာဝန်အား လွှဲအပ်နိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ လွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပေးရပါမယ်။ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ ဆောင်ရွက်ကြရပါမယ်။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲကို မဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတာ ကတိပြုပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ စစ်မှန်စည်းကမ်း ပြည့်ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမို ကရေစီစနစ်ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်ပေး ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာစေဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကတော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ဆိုရာမှာ နိုင်ငံရေးအရ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ လုံခြုံရေးအရတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ စီးပွားရေး အရ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာလည်း တည်ဆဲဥပဒေတွေကို လေးစားလိုက်နာပြီး စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ အလေ့အထကောင်း တွေရရှိလာစေဖို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနဲ့အတူ ပေါက်ဖွား လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ၊ အမြင်မတူညီမှုတွေရှိနေ ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွေကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်ခဲ့ ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မှာတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မဲမသမာမှုတွေအပေါ်မှာ ဒီညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်း နည်းလမ်းဆိုတာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က စစ်မှန်တဲ့ပါတီစုံဒီမို ကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကို အာမခံ ပါတယ်။ အဓိကကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ရမယ့် လုပ်ငန်းအားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြီးစီးရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီ ဝင်အစွန်းရောက်တွေနဲ့ ၎င်းပါတီကို ထောက်ခံသူ အစွန်းရောက်တွေအနေနဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီသွားဖို့၊ ဖြေရှင်းဖို့မလုပ်ဆောင်ခဲ့ဘဲ အကြမ်းဖက် နည်းလမ်းကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမဲ့စရိုက် တွေဖြစ်လာအောင်၊ လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှု တွေဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့ အမြင်မတူသူအားလုံးကို “ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ” သဘောထားနဲ့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို ပြန်လည်တည်ငြိမ်မှုရရှိအောင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်စုပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရပါမယ်။ အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား ကစပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝ၊ လူမှုစီးပွားဘဝကို Social Bullying၊ ဖီဆန်ပုန်ကန်ရေးလှုပ်ရှားမှု(CDM) စတာတွေနဲ့ ယိုယွင်းပျက်စီးအောင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေတာတွေ၊ အလုံးစုံပျက်သုဉ်းရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက် နေတာတွေကို ကျွန်တော်တို့စုပေါင်း အင်အားနဲ့ ဟန့်တားကာကွယ်ရပါမယ်။
နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ် အသီးသီးမှာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်၊ ပျက်စီးယိုယွင်းအောင် လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရပြုတ်ကျရေး၊ တပ်မတော် ပြိုကွဲရေးအတွက် ဦးတည်ပြီးလုပ်ဆောင် နေရုံသာမကဘဲ ကျွန်တော်တို့အားလုံး တန်ဖိုး ထားရတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား အားလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ အစဉ်အလာနဲ့ သမိုင်းကြောင်း တွေကိုပါ အခြေအမြစ်ကစပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖျက်ဆီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အထူးသတိရှိရှိ၊ အသိရှိရှိ မြင်တွေ့နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓိက ကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် စိတ်အားညှိုးငယ်ဖွယ်ရာများနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ယူပြီးချိန် ကစပြီး အခြေခံဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုမပျက်စေရန် ကျွန်တော် အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံတော်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလိုလားကြတဲ့ တိုင်းချစ်၊ ပြည်ချစ်၊ နိုင်ငံချစ်၊ ပြည်သူလူထုကိုချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အင်အားသည်သာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတော်၊ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်၊ မြန်မာရဲ့အနာဂတ်ကို မြန်မာတိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒနဲ့အညီ တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတော်ကိုရိုးသားတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်ကြပါမယ်။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံးက ဝိုင်းဝန်း ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လေးလေးနက်နက် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအရ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (Nationwide Ceasefire Agreement -NCA) ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုအပေါ်မှာ အဓိက အခြေခံဆွေးနွေးပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာပါ။ တပ်မတော်အနေနဲ့ ဒီစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အတိုင်း ခိုင်မာစွာရပ်တည်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုကို ငြိမ်းချမ်းစွာတည်ထောင်သွားဖို့ ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ ကြေညာထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများမှအပ မည်သည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းမဆို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အာဆီယံနဲ့ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်တဲ့ အခြေအနေကိုပြောလိုပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သဘောတူညီချက် ၅ ရပ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲက လုပ်ဆောင်သင့်လုပ်ဆောင်ထိုက်တာများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါတယ်။ အာဆီယံရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထားရှိဖို့ မူလအဆိုပြုထားတဲ့ ၃ ဦးအနက် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Mr. Virasakdi Futrakul ကို သဘောတူ ထားပြီးသားပါ။ သို့သော် အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အဆိုပြုမှုအသစ်တွေထပ်လာခဲ့လို့ ရှေ့မတိုးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအပါအဝင် အာဆီယံနဲ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေးကို အာဆီယံမူဘောင်အတွင်းက ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မျက်မြင်ရှင်းပြဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများခင်ဗျာ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခြား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုနည်းတူ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ တတိယလှိုင်းကို ခံစားနေရပါတယ်။ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီး စွမ်းအားကုန်ကျွန်တော် တို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ယခုဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါက ပထမလှိုင်း၊ ဒုတိယလှိုင်းနဲ့မတူပါဘူး။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပိုးတွေ့သူအရေ အတွက် မြင့်တက်လာသလို ပိုးတွေ့ရှိသူဦးရေ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ သေဆုံးတဲ့ ဦးရေလည်း ယခင်ကထက်မြင့်တက်လာပါတယ်။
ဒီလိုအချက်အလက်တွေကိုထောက်ပြပြီး သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ တွေမှာ ယနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ တတိယလှိုင်းနဲ့ ယခင်ဒုတိယလှိုင်း အခြေအနေတွေကို လွဲမှားစွာချိန်ထိုးနှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောဆိုရေးသားနေတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အမှန် တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရောဂါကူးစက်မှု အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ကူးစက်ရောဂါ ဗေဒရှုထောင့်က အရှိတရားနဲ့အနီး စပ်ဆုံးဖြစ်အောင်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီရောဂါပိုးဟာ အစောပိုင်းမှာ အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ကူးစက်ရောဂါရှုထောင့်အရ ပြင်းထန်တဲ့ သက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘဲ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ အီတလီ ကဲ့သို့ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ အမေရိကန်၊ ဘရာဇီးကဲ့သို့ အမေရိကတိုက် တောင်ပိုင်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ ကိုဗစ်ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပထဝီ အနေအထားအရ အလွန်ဝေးလွန်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းရဲ့ အဖျားပင် မရိုက်ခတ်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယလှိုင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရုန်းကန် ခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် ဒုတိယလှိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ မျိုးကွဲတွေက အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ မျိုးကွဲတွေလောက် ကူးစက်မှုနှုန်းမမြန် ဆန်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခု တတိယလှိုင်း မှာကတော့ မိမိတို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ အကြီးအကျယ် ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းနိုင်ငံ တွေမှာဆိုရင် ကိုဗစ်-၁၉ တတိယလှိုင်းဒဏ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစား နေရဆဲဖြစ်တာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအချက်တစ်ခု အနေနဲ့ကတော့ ကူးစက်မြန် ဗီဇပြောင်း မျိုးကွဲတွေပေါ်ထွက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုတွေ့ရှိမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Delta မျိုးကွဲဟာဆိုရင် ကူးစက်မှုအားအနေနဲ့ ယခင်မျိုးကွဲတွေထက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုမြန်ဆန်လာတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးဟာပွား များနိုင်မှု (Reproduction number) (R0) ဂဏန်းအားဖြင့် ၂.၄ မှ ၂.၆ အတွင်းသာရှိပေမယ့် Alpha နှင့် Delta မျိုးကွဲသစ်တွေရဲ့ (R0) ဂဏန်းသည် ၄ မှ ၅ နှင့် ၅ မှ ၈ အသီးသီးရှိတယ်လို့ သိရှိ ရပါတယ်။ (ဆိုလိုတာကတော့ တကယ်လို့ (R0) ဂဏန်းက ၂ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရောဂါပိုးရဲ့ ကူးစက်ပြန့်ပွားနှုန်းဟာ လူ ၁ ဦးမှ ၂ ဦး၊ ၂ ဦးမှ ၄ ဦး၊ ၄ ဦးမှ ၈ ဦး၊ ၈ ဦးမှ၁၆ ဦး စသဖြင့် (R0)ဂဏန်းအတိုင်း ဆတိုးကူးစက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။) အခု တတိယလှိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိရတဲ့ မျိုးကွဲတွေကတော့ အဓိကအားဖြင့် စိုးရိမ်ဖွယ်မျိုးကွဲ အုပ်စုတွေလို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက သတ်မှတ်ထားတဲ့ Alpha, Beta နှင့် Delta မျိုးကွဲတွေ ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ အခုတတိယလှိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ မျိုးကွဲသစ်တွေရဲ့ ပွားများနိုင်မှု(R0)ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒုတိယလှိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ မျိုးကွဲတွေထက် ဘယ်လောက်ထိ ပိုမိုကူးစက်နှုန်းမြန်မယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းကြည့် နိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး (R0) ဂဏန်း ၄ ရှိတဲ့အတွက် ရောဂါပိုးရဲ့ကူးစက်ပြန့်ပွားနှုန်းဟာ လူ ၁ ဦးမှ ၄ ဦး၊ ၄ ဦးမှ ၁၆ ဦး၊ ၁၆ ဦးမှ ၆၄ ဦး စသဖြင့် ကူးစက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ (R0) ဂဏန်း ၈ ဆိုရင်တော့ ၁ ဦးမှ ၈ ဦး၊ ၈ ဦးမှ ၆၄ ဦး၊ ၆၄ ဦးမှ ၅၁၂ ဦး ဆတိုး ကူးစက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အိမ်နီးချင်းနဲ့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာ ကျယ်ပြန့်စွာဖြစ်ပွားနေခြင်းနဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မျိုးကွဲတွေရဲ့ ကူးစက်မှုနှုန်းအလွန်မြန်ဆန် နေခြင်းတို့က ပထမလှိုင်း၊ ဒုတိယလှိုင်းတွေနဲ့ မတူညီဘဲ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အခုလို ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားနေတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုကို အထိရောက်ဆုံးပေးနိုင်တဲ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွေမှာ လူသားအရင်းအမြစ် ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်အောင်လည်း မဲမသမာမှုကြောင့် ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ NLD အစွန်းရောက်တွေနဲ့ အဲဒီပါတီကိုထောက်ခံသူ အစွန်းရောက်တွေက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဒီလို ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာ ရောဂါပိုးစစ်ဆေး အတည်ပြုရေးနဲ့ ကုသရေးတွေမှာ လူနာနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အား အဆမတန်မညီမျှမှုက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းရဲ့ ကြီးမားသည့် စိန်ခေါ်မှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကြားက ကိုဗစ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးမှာ ရှေ့တန်းကျကျ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ တာဝန်သိကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(Volunteer) များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း များနဲ့ အလှူရှင်များကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း ပြောကြားလို ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မသမာသူများရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် CDM မှာပါဝင် သွားကြတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ ဆူပူလှုပ်ရှားမှုနဲ့ လှုံ့ဆော်မှုများမှာ ဦးစီး ဦးဆောင် ပါဝင်ခဲ့သူများမဟုတ်ရင် ပုဒ်မ ၅၀၅ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြေလျှော့ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုကိစ္စဟာ နိုင်ငံရေးကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုရေး ကိစ္စ၊ လူ့အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
စိန်ခေါ်မှုတွေ ဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခက်အခဲအတား အဆီးအမျိုးမျိုး ကြားက ပြည်သူလူထု ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ တတိယလှိုင်းကို ကျော် ဖြတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလို တတိယလှိုင်းစတင်တဲ့အခါ ရှေ့လှိုင်းတွေမှာ အတွေ့အကြုံရှိထားတာက အားသာချက် ဟုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ရောဂါပိုးရဲ့ကူးစက်ပုံကို သိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသနည်းတွေကိုလည်း အကျွမ်းဝင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကိုလည်း ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအထိ ဆောင်ရွက် ထားနိုင်တဲ့အတွက် ကူးစက်မှုအရှိန်ကို အထိုက်အလျောက် တန့်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို သဘာဝဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အစိုးရယန္တရားက ဟိုယခင်ကလို ထိန်းချုပ် ကန့်သတ်မှုနဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုတွေမရှိတော့ဘဲ သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် အဆင့်ဆင့် သော အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကို လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုထားတဲ့အတွက် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေ မြန်ဆန်လာတာကိုလည်း တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ယခင်က Mask ၅ သန်းကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေကို ဖြန့်ဝေဖို့အတွက် အချိန်တော်တော်ကြာကြာ ယူခဲ့ရပေမယ့် ယခုတော့ တပ်မတော်လေယာဉ်တွေကို အသုံးပြုပြီး Mask ၁၂ သန်းကို ချက်ချင်း ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း လစဉ် ၁၂ သန်း ဖြန့်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း ကိုဗစ်ကုသရေးမှာလိုအပ်တဲ့ Oxygen Concentrator တွေ၊ Liquid Oxygen အပါအဝင် ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းမှုအတွက် FDA ထောက်ခံချက်နဲ့ သွင်းကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားဖို့ မလိုတဲ့အပြင် အခွန်တွေကို ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်မှုကွင်းဆက် ဖြတ်တောက် နိုင်ဖို့အတွက် ကန့်သတ်တားမြစ်မှု(community restriction)တွေ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက် ရသလို တစ်ဖက်မှာလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် ကာလရှည် နိုင်ငံ့စီးပွားရေး နစ်နာခဲ့ရမှုတွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝတွေ ပြန်လည်ဦးမော့လာအောင် ချိန်ဆပြီး လုပ်ဆောင်နေရတာလည်းရှိနေပါတယ်။
စောစောစစ်၊ စောစောတွေ့၊ စောစောခွဲထုတ်နိုင်ခြင်းက ရောဂါကူးစက်မှု ကွင်းဆက် ဖြတ်တောက်နိုင်ရေးအတွက်ရော၊ လူနာတွေအတွက်ပါ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်ဖြစ် ပါတယ်။ ပိုးတွေ့လူနာတွေကို သူတို့ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေအရ သင့်တော်မယ့် ကိုဗစ်-၁၉ ကုသမှုစင်တာတွေကို လွှဲပြောင်းကုသမှုပေးနိုင်ဖို့ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်း ရောဂါကူးစက်ခံရမှု သံသယ ရှိတယ်ဆိုရင် နေအိမ်မှာ ဆေးမြီးတိုနဲ့ကျိတ်ပြီးကုသခြင်းမပြုဘဲ နီးစပ်ရာ ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးဌာနတွေကို သွားရောက်စစ်ဆေးမှုခံယူပြီး အဲဒီနေရာတွေကတစ်ဆင့် သင့်တော်တဲ့ ကိုဗစ်ကုသမှုစင်တာတွေကို ဆက်လက်လွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်လို့ ပြည်သူ တွေအနေနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် သတင်းပို့ဆောင်ရွက်သွားစေလိုပါတယ်။ တပ်မတော် အနေနဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာလက်ခံကုသဖို့နေရာ ၁၂၇၈ ခုမှာ လူဦးရေ ၃၉၀၀၀ ဦး လက်ခံကုသနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားရှိသလို အရပ်ဘက်အနေနဲ့လည်း ၁၄၅၃ နေရာမှာ လူဦးရေ ၇၁၅၀၀ ဦး လက်ခံနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ community COVID positive Center တွေကို လိုအပ်ချက်ရှိသလောက် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေး သွားပါမယ်။
အောက်ဆီဂျင်ကတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ကုသဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးကြီးလှပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာက အောက်ဆီဂျင်သုံးစွဲရာမှာ ဆရာဝန်များရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ အညီသာ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း အချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေနဲ့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အောက်ဆီဂျင် စက်ရုံတွေ၊ တပ်မတော်ဆေးရုံတွေ၊ အရပ်ဘက်ဆေးရုံတွေမှာရှိတဲ့ အောက်ဆီဂျင် စက်ရုံတွေ၊ ပုဂ္ဂလိကအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတွေမှာ အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို စဉ်ဆက် မပြတ် monitor ပြုလုပ်ပြီး အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ဆေးရုံ/ကုသမှု စင်တာတွေကို ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့ အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အကန့်အသတ် ရှိလာသလို အသုံးများလာတဲ့အနေအထားမှာ ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် စီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ထပ်မံပြီးတော့ အောက်ဆီဂျင်ကို အချိန်တိုအတွင်း များများနဲ့ အရည်အသွေးမီမီ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် liquid oxygen ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ liquid oxygen ကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး စတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားမှုမြင့်မားနိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါတယ်။ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၊ ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ တပ်မတော်ဆေးရုံများနဲ့ နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှာ တိုးချဲ့တပ်ဆင်လျက်ရှိရာ ယခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ ပြည်သူ့ ဆေးရုံများ၊ ကျန်းမာရေးဌာနများရဲ့ အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေကို ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကူးစက်မှုကာကွယ်ရေးနဲ့ ပြန့်ပွားမှုနှုန်း လျော့ကျဖို့အတွက် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေကို အကြိမ်ရေပြည့်အောင် စနစ်တကျထိုး နှံဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်အထိ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး အားလုံးမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခဲ့တဲ့အခါမှာ လူဦးရေ ၁၈၂၅၆၄၂ ဦး(တစ်သန်း ရှစ်သိန်းကျော်) (ဦးတည်လူဦးရေရဲ့ ၆.၀၈%) ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ်ထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး တွေကို များများနဲ့မြန်မြန် ထိုးနှံပေးနိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေရရှိဖို့အတွက် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းဝယ်ယူဖို့ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသလို တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက ဝယ်ယူထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးအရေအတွက် ၄ သန်းအနက် အခု ဇူလိုင်လ စတုတ္ထပတ်မှာ ၃ သန်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများ အမြန်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ နောက်ထပ်ကာကွယ်ဆေး ၃ သန်း ကလည်း သြဂုတ်လအတွင်း ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်လို့ ရရှိလာမယ့်ကာကွယ်ဆေးများကို ဦးတည်အုပ်စုတွေနဲ့ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အလိုက် စနစ်တကျထိုးနှံပေးနိုင်ဖို့ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရုရှားနိုင်ငံကဝယ်ယူထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေး ၂ သန်းဟာလည်း အသုတ်လိုက် ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ရရှိရန် ကျန်ရှိနေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးများ ရရှိရေးအတွက်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ကပ်ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေ၊ အဖွဲ့အစည်း တွေကို လည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း နဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးကို ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှု ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုဟာ ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးမှာ ကြီးမား ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကာကွယ်ရေးနဲ့ ကုသဆေးများ ရရှိရေးကိုလည်း နိုင်ငံတိုင်းက ကြိုးစားနေရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မိမိမြို့နယ်၊ ဒေသအတွင်း အခုလိုကာကွယ် ဆေးထိုးနှံခြင်းတွေဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ ကျန်းမာရေး အသိရှိရှိနဲ့ သွားရောက်ထိုးနှံ ကြဖို့လည်း အသိပေးလိုပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားပြည်သူများခင်ဗျာ ပြည်သူလူထုအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ထိန်းချုပ် ကာကွယ် ကုသရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလေးထားမှုနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေ လျော့နည်း လာခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း တွေထဲမှာ လူမှုကွန်ရက်ကတစ်ဆင့် မဟုတ် မမှန်တဲ့ အဖျက်အမှောင့်သတင်းတွေ ရေးသားဖြန့်ဝေခြင်းကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်အတွင်း ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာ စေဖို့နဲ့ ပြည်သူလူထုကြား စိုးရိမ်မှုကြီးထွားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ရုံးစာအတုတွေ ရေးသားဖြန့်ချိနေသလို ဆေးရုံတွေက လူနာတွေကို လက်မခံဘဲနှင်ထုတ် နေတယ်၊ အောက်ဆီဂျင်တွေကို ထပ်မံတင်သွင်းခြင်းမပြုဖို့ အစိုးရကပိတ်ပင်လိုက်တယ်၊ အသစ် ရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကို ကမ္ဘာကအသိအမှတ်မပြုဘူး၊ ထိုးရင် အန္တရာယ်ရှိ နိုင်တယ် စသဖြင့် မဟုတ်မမှန်တဲ့ သတင်းတွေကို ရေးသားဖြန့်ဝေနေတာကိုတွေ့ပါ တယ်။ တစ်ကျော့ပြန် ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာချိန်မှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ လူထူထပ်တဲ့ နေရာတွေ သွားရောက်တာကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ တစ်ဦးချင်း ခပ်ခွာခွာ နေထိုင်ခြင်း၊ Mask နဲ့ Face Shield တွေတပ်ဆင်ခြင်း၊ လက်ကိုမကြာခဏ ဆေးကြောခြင်းတွေကို အရှိန်တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အစား ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါ စည်းကမ်း ချက်တွေကို မလိုက်နာကြဖို့၊ ကာကွယ်ဆေးမထိုးကြဖို့နဲ့ လူထုကြားမှာ အမျိုးမျိုးသော စုဝေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဆင်ခြင်တုံကင်းမဲ့စွာ၊ အကြံပက်စက်စွာ စည်းရုံး လှုံ့ဆော်နေမှုတွေက ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက် တာဖြစ်သလို ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါကို လက်နက်သဖွယ်အသုံးပြုလာတဲ့ ဇီဝအကြမ်းဖက်တဲ့ Bioterrorism သဘောတရားပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးလိုဘကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းဟာ ဘာသာရေးအရဆိုရင်လည်း အင်မတန် အကျည်းတန်တဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက နေတစ်ဆင့် နိုင်ငံအတွင်း မတည်ငြိမ်မှတွေ ဖြစ်ပေါ်အောင် လမ်းကြောင်းပေး လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်က အဖျက် အမှောင့်လုပ်ရပ်တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်း ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆူပူဆန္ဒပြမှုများဟာ သာမန် ဆန္ဒပြရာကတစ်ဆင့် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုကနေ လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်လာတဲ့အထိ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို အလစ်ချောင်းမြောင်း သတ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ ပြည်သူကိုသတ်တာပါလဲ။ ဘာကြောင့် အေးချမ်းစွာနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို တိုက်ခိုက်တာပါလဲ။ ဒါကို လက်ခံလို့မရပါဘူး။ အကြမ်းဖက်ဆူပူဆန္ဒပြမှုကို သူ့ဥပဒေနဲ့အညီ တုံ့ပြန်အရေးယူရမှာက နိုင်ငံတကာ ကျင့်စဉ်အတိုင်းပါပဲ။ သေစေလောက်တဲ့ လက်နက်၊ မိုင်းများ အသုံးပြု တိုက်ခိုက်တာ ကိုလည်း ပြုလုပ်၍မရအောင် တုံ့ပြန်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ အနည်းငယ်သော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများမှအပ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း တည်ငြိမ်မှုရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ EAo တွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာများမှအပ ကျန်နေရာများ လုံးဝ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့ အမျိုးမျိုးသော စုဝေးမှုတွေက မြန်နှုန်းမြင့် ဗီဇကွဲကူးစက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို လူအများစုဝေးမှုဖြစ်ပေါ် စေဖို့အတွက်လည်း လူမှုကွန်ရက်ကတစ်ဆင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ ဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ကပ်ရောဂါ အမျိုးမျိုးကို ရှေးယခင်ကပင် အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ဖူးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပလိပ်ရောဂါ၊ ကျောက်ကြီးရောဂါ စတဲ့ ယခင်ဖြစ်ပွားပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ကပ် ရောဂါ အမျိုးမျိုးဟာ ယနေ့ခေတ်ဆေးပညာ တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေမှာ ထိန်းချုပ်ရ လွယ်ကူ ပေမယ့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါဖြစ်တဲ့အတွက် အသက်ရှူတိုင်း၊ ရှူတိုင်း ကူးစက်နိုင်ခြေတွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအများရဲ့ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲမယ့်ရောဂါမျိုးဖြစ် တဲ့အတွက် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကို အသာစီးက ထိန်းချုပ် ကာကွယ်ကုသနိုင်တာ မရှိသေးတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးစနစ် အားကောင်းတဲ့ အမေ ရိကန်နိုင်ငံက ဆေးရုံတွေမှာတောင် ခုတင် နေရာ မလုံလောက်တာတွေ၊ အသက်ရှူစက်နဲ့ လေသန့်စက် ပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ နောက်ဆုံး မိမိနေအိမ်မှာပဲ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ကုသကြရတဲ့အခြေအနေ အထိ ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင် ပြဿနာဆိုတာကလည်း Outbreak ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတိုင်း မလွှဲမရှောင်သာကြုံတွေ့ရ မယ့်အခက်အခဲဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီး ချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့မှာလည်းပဲ အလူးအလဲ ရင်ဆိုင်နေကြရတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ယနေ့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီအစိုးရဟာ ကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ် ကာကွယ် ကုသရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တတ်စွမ်းသမျှဆောင်ရွက်ဖို့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ရပ်မှာ ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်ရောဂါစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊ ကန့်သတ်မှုတွေကို တတ်စွမ်းသမျှ ဖြေလျှော့ပေးထားပြီဖြစ်သလို လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင် မှုတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်မှုကွင်းဆက် ဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့အတွက် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်တွေနဲ့ကိုက်ညှိ ပြီးတော့ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့အထိ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ရုံးပိတ် ရက်ရှည်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ကူးစက်မှု ကွင်းဆက်ဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့ စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ ရာမှာ နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက် အဖျက်သမားအချို့မှအပ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ စွမ်းအား၊ ချီးကျူးဖွယ် ကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့က စလို့ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ ၄၀ .၈၂ ရာခိုင်နှုန်း ကနေ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ၃၄.၇၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိကျဆင်းလာပါတယ်။ ဒါကို ဒီထက် ပိုကျဆင်းရေး ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ရောဂါကွင်းဆက်ကို ထိထိ ရောက်ရောက် ဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့ နောက်ထပ်တစ်ပတ် ထပ်မံပြီး ရုံးပိတ်ရက်ရှည် ကြေညာပါမယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာလည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း တွေ မထိခိုက်စေ ဖို့ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူရှိနေမယ်။ ပြည်သူလူထုကို စွမ်းအားပြည့်ကာကွယ်ပေးမယ်။ အားလုံးလက်တွဲညီညီ စုပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဒီကပ်ရောဂါကို မြန်မာတွေ အောင်နိုင်ရမယ်လို့ လေးနက်စွာ ပြောကြားလိုပါတယ်။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ရာမှာ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ၅ ရပ်၊ ဦးတည်ချက် ၉ ရပ် ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ လူဦးရေသန်း ၇၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး စား၊ ရေ၊ ရိက္ခာ လိုအပ်ချက်ဟာ မြင့်မားနေ ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကာလမှာလည်း အခြားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကို လျှော့ချ နိုင်ပေမယ့် စားသောက်ရေးကိစ္စတွေကတော့ ရှိနေ၊ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အသုံးချနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးကိုအခြေခံတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ ကျေးလက်နေ ပြည်သူလူထု ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတဲ့ နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ အထွက်နှုန်းတိုးစေဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက် တွေဖြစ်တဲ့ “မျိုး၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း” ဆိုတဲ့ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်တွေရရှိဖို့၊ သဘာဝမြေသြဇာ၊ ဓာတ်မြေသြဇာတို့ပေါင်းစပ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ စိုက်ပျိုးမြေများ ဖော်ထုတ် ပေးတာတို့၊ စိုက်ပျိုးရေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတာတို့၊ ကောင်းမွန်တဲ့စိုက်နည်း စနစ်တွေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒေသအများစုမှာ မွေးမြူလို့ရတဲ့ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ နွား၊ ငါး စတဲ့မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေကို အားပေးဆောင်ရွက်သွားရပါမယ်။ အရေးကြီးတာက စနစ်ကျနတဲ့ မွေးမြူရေးစနစ်ဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ မြစိမ်းရောင် အသားကဏ္ဍ မွေးမြူရေးကျေးရွာ ထူထောင်ခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မွေးမြူရေး တိရစ္ဆာန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း ထွက်ရှိတဲ့ကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုပြီး မွေးမြူရေးအစာ လုံလောက်စွာထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားရပါမယ်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်နေပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေရှိ နေပါသေးတယ်။ ဥပမာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ချည်မျှင်နဲ့အထည်လုပ်ငန်းမှာ နှစ်စဉ် ပြည်ပကတင်သွင်းရတဲ့ ချည်မျှင်နဲ့အထည် ဒေါ်လာ သန်း ၁ ထောင်ကျော်ဖိုးခန့်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဝါစိုက်ပျိုးနိုင် တဲ့ မြေ၊ ရေ၊ရာသီဥတုတွေရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်လည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝတ်ရေးဟာလည်း လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်တွင်းမှာ ဝါစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အားပေးရေး၊ ချည်မျှင်နဲ့အထည်လုပ်ငန်း များအားပေးရပါမယ်။ မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းတွေ၊ ဆည်ရေသောက်စီမံကိန်းများ၊ ဝါ စိုက်ပျိုးရေးတိုးချဲ့သွား ရပါမယ်။ အလားတူ စားအုန်းဆီတင်သွင်းနေရတာတွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်း နေရတာတွေကို ပြည်တွင်းမှာပဲ ဖူလုံအောင်ပြုလုပ်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားကြရပါမယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းအောက်ပိုင်း မြိတ်၊ ဘုတ်ပြင်း၊ ကော့သောင်းဒေသတွေမှာ ဆီအုန်း အပြည့်အဝ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေး၊ နှမ်း၊ မြေပဲသာမက မုန်ညင်း၊ နေကြာ၊ ပန်းနှမ်း စတဲ့ ဆီထွက်သီးနှံများ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေး၊ အထွက်နှုန်းတိုးရေးလုပ်ကြရပါမယ်။ ရာသီဥတုနဲ့ မြေအခြေအနေ ကောင်းတဲ့နေရာများမှာ နို့စားနွားမွေးမြူ ရေးများဆောင်ရွက်ပြီး နို့ထွက်ပစ္စည်း ပြည်တွင်းမှာလုံလောက်ပြီး ပိုလျှံအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ “ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးပါ” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုများ၊ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို အားပေးကြဖို့လိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲကြောင့် ပြည်ပသို့ထွက်ခွာ အလုပ်လုပ်နေရသူများအတွက် အလုပ်အကိုင်များရရှိစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်သုံးဆီ များ သုံးစွဲမှုလျှော့ချနိုင်ရေး၊ အခြားစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုနိုင်ရေးတို့ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမယ့် စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် တစ်ခုနဲ့ မွေးမြူရေးနဲ့ ဆေးကုသရေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုသာရှိပါတယ်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေကို နည်းစနစ်တကျ၊ ခေတ်မီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး ကျောင်းတွေကို သိပ္ပံ၊ ကောလိပ်အဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့၊ ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ပြီး အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်နဲ့ ကျွမ်းကျင်သူများ ပေါ်ထွက်လာရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကို ခေတ်မီစေဖို့၊ စက်မှုအခြေခံစနစ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နဲ့ အခြားကဏ္ဍတွေမှာလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေဖို့ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ ကဏ္ဍမှာလည်း မျက်ခြည်မပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
စိုက်ပျိုးရေးအဓိကထားတဲ့အတွက် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် ဈေးကွက်ကလည်း သေချာဖို့ လိုပါတယ်။ နယ်စပ်နဲ့ပုံမှန် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောင်းမရတာများဖြစ်ပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနဲ့ နှစ်စဉ်နီးပါးကြုံကြရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခေတ်မီသိုလှောင်ရေးစနစ်၊ တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များ ကြိုးစားလုပ်ဆောင် ရပါမယ်။ ဥပမာ ကြက်သွန်နီဈေးကွက်မှာ ကြက်သွန်နီ ရိုးရိုးပို့ကုန်အပြင် ကြက်သွန်မှုန့်၊ ကြက်သွန် ကြော်၊ ကြက်သွန်နှစ်များ ပြုလုပ်တာမျိုး ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ တောင်သူတွေ စိုက်ပျိုး ရေးထုတ်ကုန်၊ မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များအတွက် အရှုံးမပေါ်ရလေအောင် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ Agro Base Industry စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းကို သွားရပါမယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ ၂၀၁၉ ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်းအရ အသက် ၅ နှစ်နဲ့ အထက် ၈.၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ ကျောင်းမနေဖူးတာကိုတွေ့ရပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် အသက် ၂၅ နှစ်နဲ့အထက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထဲမှာ အလယ်တန်းအဆင့်နဲ့ ၎င်းအဆင့်အောက် ပညာ သင်ကြားခဲ့ရသူပေါင်း ၁၈.၂ သန်းရှိပါတယ်။ နိုင်ငံ့လူဦးရေရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံလောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရည်မြှင့်တင်ရေး၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ပညာရည်မြှင့်တင် ရေးကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြနေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်သဖွယ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို ခိုင်မာစေဖို့၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်စေဖို့ဆိုရင် ပညာတတ်များစွာ ရှိဖို့လိုပါတယ်။ သိပ္ပံ ပညာရှင်၊ နည်းပညာပညာရှင်၊ ဥပဒေ ပညာရှင်၊ စီးပွားရေး ပညာရှင်များ၊ ဆေးပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို လက်တွေ့ကျကျအားပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ပညာရေးကိုအားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အခက်အခဲ တွေကြားက ပညာရေးခါးဆက်မပြတ်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီး ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ယခု ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် ခေတ္တပြန်ပိတ်ထားရပါတယ်။ ကျောင်းများဖွင့်လှစ်ချိန်က ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ မိဘ ပြည်သူများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ပညာသင်ကြားနေသူ လူငယ်လူရွယ်များအားလုံး ကျောင်းပညာကိုသာ အာရုံစိုက်အလေးထားသင်ကြား လေ့လာကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံနဲ့ ပြည်သူအများစုလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်တဲ့ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ လက်တွေ့ကျကျ၊ အစုအဖွဲ့အလိုက် အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့အတွက် သမဝါယမနဲ့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနကို အသစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ယခင်စနစ်ဟောင်း သမဝါယမစနစ်လို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှာ မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုပ်ငန်းတူများ၊ အကျိုးတူများ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ့် ပြည်သူ့အခြေပြုစနစ်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ များမှာပင်လျှင် ဒီစနစ်ကောင်း၊ သမဝါယမစနစ် ကိုကျင့်သုံးလျက်ရှိပါတယ်။ ယခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး သမဝါယမအသင်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာလမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင် မှုကဏ္ဍတွေမှာ အခက်အခဲတွေရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း ရှိနေပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ အခြေခံစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ လူမှုဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ လုံလောက်မှုရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဆိုရာမှာလည်း အားကစား၊ ကြံ့ခိုင်ရေးတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အားကစား မြှင့်တင်ခြင်းဟာ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို တက်စေပါတယ်။ ကာယစွမ်းပကားသာမက စိတ်ဓာတ် စွမ်းပကားပါ မြှင့်တင်ပေးတာပါ။ ကိုဗစ်ကြောင့် ကန့်သတ်မှုများ ရှိနေပေမယ့်လည်း အားကစားမြှင့်တင်ရေး မျက်ခြည်မပြတ်ကြည့်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသအားလုံးမှာ အားကစားကွင်း၊ အားကစားရုံများ အဆင့်မီမီရှိရေး ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ အားကစားမြှင့်တင်မယ်ဆို လူငယ်တွေရဲ့ အင်အားဟာ အဓိကကျတဲ့အတွက် လူငယ်နဲ့အားကစားကဏ္ဍကို အားပေးဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကိုတာဝန်ယူခဲ့တာ (၆)လရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် အမှတ်(၁)အရလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်လို့ တာဝန်ရှိသူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျန်ရှိနေတဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ဦးတည်ချက်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်စေဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်၊ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းဆိုင်ရာများ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် သွားဖို့ရှိကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်။
(၁) နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ စစ်မှန်စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် အာမခံပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အရေးပေါ်ကာလလုပ်ဆောင်ရမယ့် တာဝန်တွေပြီးဆုံးတဲ့အခါ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပါမယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာတွေ များစွာရှိပါတယ်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာရေးလိုလားတဲ့ မိဘပြည်သူအားလုံးက ဝိုင်းဝန်းကူညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါ။
(၂) ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကို ပြည်သူ၊ အစိုးရနဲ့ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပူးပေါင်း စွမ်းအားနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြပါမယ်၊ ကျော်လွှားကြပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခက်အခဲတွေပဲ ရှိပါစေ အောင်မြင်နိုင် ရပါမယ်။ အောင်စိတ်သွင်းပြီး ကျော်လွှား ကြပါစို့။
(၃) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေခံစီးပွား လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး ကဏ္ဍတွေကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံးအဆင့် ကပ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ အခုလိုကာလမှာ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ ဖူလုံမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အားဟာပြည်တွင်းမှာသာရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး “အရေးကြီးပြီဖြစ်လို့ သွေးစည်းကြပါစို့” ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး “စုပေါင်း ညီညာအောင်ကြောင်းဖြာ” ရပါမယ်ဗျာ..
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ မလေးရှားနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Zahairi Baharim ၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA တို့အားလကျခံတှဆေုံ့(ရုပျသံသတငျး)